ဥာဏ်ကလေးနဲ့ ခေါင်းညိတ်စမ်းပါ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
မနေ့က ဒကာ ဒကာမတွေ ဟောခဲ့ပါတယ်၊ သင်္ခါရတရားလို့ဆိုတာ ဘာပါလိမ့်မတုံးလို့ မေးတဲ့ အခါကျတော့၊ ခန္ဓာငါးပါးလို့ မနေ့ညက ပြောကြတယ်၊ သင်္ခါရတရားဆိုတာ ဘာပါလိမ့် .. ( ခန္ဓာငါးပါးပါ ဘုရား ) ။
ကောင်းပြီ သင်္ခါရတရားဆိုတာ ခန္ဓာငါးပါးကိုဆိုတယ်၊ ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတွေ ခန္ဓာငါးပါးဟာ သူများပြုပြင်လို့ဖြစ်တဲ့ ခန္ဓာငါးပါး ... ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ဒါဖြင့် ဒီထဲမှာ မိမိစွမ်းရည်သတ္တိမပါဘူးပေါ့.. ( မပါပါဘူးဘုရား )၊ မိမိစွမ်းရည်သတ္တိမပါတဲ့ ခန္ဓာငါးပါး ဘာတရားခေါ်ကြမယ်... ( သင်္ခါရတရားပါဘုရား ) သင်္ခါရတရား ။
သြော်...ခုတရားနာပြီး နေကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမတွေဟာ သူတစ်ပါးမှီပြီးသကာလနေရတဲ့ ခန္ဓာငါးပါးလား၊ ဒါကြောင့် သင်္ခါရတရားလို့ မှတ်ကြပါ... ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ဒါကြောင့် ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက သဗ္ဗေသင်္ခါရာ၊ သဗ္ဗေ - အလုံးစုံကုန်သော၊ သင်္ခါရာ - မင်းတို့ခန္ဓာငါးပါးတို့သည်ဆိုတော့ ဦးခင်မောင်ကိုက်ပလား... ( ကိုက်ပါတယ်ဘုရား ) ။
ကောင်းပြီ ဒါမနေ့က ဒကာ ဒကာမတွေ တရားစကားဖြစ်နေလို့ သင်္ခါရ ပြောခဲ့ရာမှ မစုံတတ်သေးလို့ ဒီနေ့သင်္ခါရတရားကို အစုံပြန်ပြောဦးမယ်... ( မှန်လှပါ ဘုရား ) ။
ခန္ဓာငါးပါးဟာ ဘာတရားခေါ်ကြမတုံး ... ( သင်္ခါရတရားပါဘုရား )၊ သြော်.. ဒါဖြင့် ခန္ဓာငါးပါးဟာ သင်္ခါရ တရားဆိုတာတော့ သဘောကျသွားပြီ ။
သူပြုပြင်တဲ့ တရားကဘယ်နှစ်ပါးပါလိမ့် ... ( လေးပါး ပါဘုရား ) ၊ ကံရယ်၊ စိတ်ရယ်၊ ဥတုရယ်၊ အဟာရရယ်။ ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အဟာရရယ်ဆိုတာ အကြောင်းတရားလေးပါးလို့ ဒကာ ဒကာမတွေ မှတ်ထား လိုက်တာပေါ့ ... ( မှန်လှပါ ) ။
ဒီတရားလေးခုက ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့ ခန္ဓာငါးပါးလို့ မှတ်ထားပါ...( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ကောင်းပြီ ဒါဖြင့်၊ ဒီတရားလေးခုက ကံဆိုတာသည် ဒကာ ဒကာမတို့၊ ဒီ ဒကာ ဒကာမတွေ၏ ရုပ်နာမ်ရှိတဲ့အနက်၊ ကံကရုပ်ကိုပြုပြင်တယ်လို့ မှတ်ထားလိုက်တာပေါ့ ... ( မှန်လှပါ ) ။
နာမက္ခန္ဓာလေးပါး အသာထားလိုက်၊ ရုပ်တရားဘယ်သူကပြုပြင်တာပါလိမ့် .. ( ကံကပြုပြင်တာပါ ဘုရား ) ။
သြော်.. ရုပ်တရားကို ကံကပြုပြင်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်သားပဲ၊ မျက်စိအကြည့် ရုပ်ကလေးကို ကမ္မရုပ် လို့ခေါ်တယ်၊ နားအကြည့်ရုပ်၊ နှာခေါင်းအကြည့်ရုပ်၊ လျှာအကြည့်ရုပ်၊ ဟဒယ၀တ္ထဆိုတဲ့ရုပ် ။
အဲဒါတွေဟာ ကံကလုပ်ပြီးသကာလထားတော့ မိမိတို့၏မျက်လုံးလို့၊ မိမိတို့၏ နားလို့ကြားတတ်တာ လေးတွေမှတ်မထားပါနဲ့၊ မိမိနဲ့ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး၊ ကံကပြုပြင်ထားတာလို့ မှတ်လိုက်ပါ ... ( မှန်ပါ့ ) ။
ဒီတစ်ကိုယ်လုံးမှာလည်း စိတ်တွေ တစ်ခါတလေ စိတ်ကြည်ရင် ရုပ်ကြည်တယ်ဆိုတာ ဒကာ ဒကာမတွေ ကိုယ့်ဟာကိုယ်အကဲခတ်ရင် သိပါတယ် .. ( မှန်လှပါ ) ။
စိတ်ကြည်ရင်.. ( ရုပ်ကြည်ပါတယ်ဘုရား ) ဒါဖြင့် စိတ်ကဖြစ်တဲ့ ရုပ်တရား၊ ဒါဖြင့် ရုပ်တရားမှာ ကံက လည်းလုပ်ထားတယ်၊ စိတ်ကလည်း လုပ်ထားတယ် ။
ဥတုတွေက ပူတယ်၊ အိုက်တယ်ဆို ဒကာ ဒကာမတွေက ရုပ်တရားညှိုးပြီးသကာလနေကြတယ်၊ အဲဒီညှိုးရုပ်တွေဟူသ၍ကလည်း သြော်.. ဥတုကလုပ်တာပါလား ။
စားသောက်ကောင်းပြန်တော့ ၀ဖြိုး၊ စားသောက်မကောင်းပြန်တော့ ပိန်ခြောက်၊ ဦးဝရေ ဒီလိုမနေ ဘူးလား... ( နေပါတယ်ဘုရား ) ။
အဲဒါတွေကျတော့ ဒကာ ဒကာမတွေက မှတ်လိုက်တာပေါ့၊ အဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်.. ( မှန်ပါ့ ) ။
သြော်... ဒါဖြင့်ရုပ်မှာကိုင်တွယ်ရတဲ့ ဒကာ ဒကာမတွေ ရုပ်မှာ၊ ချိန်တွယ်ရတဲ့ရုပ်မှာ အကြောင်း လေးပါးရှိတယ် ... ( မှန်လှပါ ) ။
ရုပ်မှာ အကြောင်းဘယ်နှစ်ပါးပါလိမ့် ... ( လေးပါပါဘုရား ) ဒါဖြင့် ဒါရုပ်သင်္ခါရတရား၊ ရုပ်သင်္ခါရ တရားမှာ အကြောင်းလေးပါးက ဦးခင်မောင်ပြုပြင်တယ်... ( မှန်လှပါ ) ။
နာမ်သင်္ခါရတရား ယနေ့အထူးထည့်ပေးရမယ်.... ( မှန်လှပါ ) ရုပ်သင်္ခါရတော့ဖြင့် ဦးခင်မောင်ရေ ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အဟာရ ကျေနပ်ကြပလား... ( ကျေနပ်ပါတယ် ဘုရား ) ။
ရုပ်သင်္ခါရမှာတော့ ဘယ်သူပြုပြင်ပါလိမ့် .. ( ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အဟာရက ပြုပြင်ပါတယ်ဘုရား ) ။
ဒါဖြင့် ဘုရားတပည့်တောတို့ သန္တာန် နာမက္ခန္ဓာတရားလေးပါး၊ ဝေဒနာက္ခန္ဓာ၊ သညာက္ခန္ဓာ၊ သင်္ခါရက္ခန္ဓာ၊ ၀ိညာဏက္ခန္ဓာဆိုတဲ့ စိတ်တွေလည်းရှိပါတယ် ။
အဲဒါတွေကျတော့ ဘယ်သူကများ ပြုပြင်လို့ တပည့်တော် သန္တာန်မှာ ပေါ်ရပါလိမ့်မတုံးဆိုတော့၊ ဦးခင်မောင်ရေဒီလေးပါးလည်း ပြောရလိမ့်မယ် .. ( မှန်လှပါ ) ။
ဒါ ဒီလေးပါး မနေ့က ကျန်နေတဲ့အတွက် ဒီတရားပြန်ဆက်လို့ အောက်မေ့ရလိမ့်မယ် ... ( မှန်လှပါ ဘုရား ) ။
ရုပ်သင်္ခါရမှာ အကြောင်းဘယ်နှစ်ပါးပါလိမ့် ... ( လေးပါးပါဘုရား ) သြော်.. ရုပ်သင်္ခါရမှာ အကြောင်း လေးပါးက ပြုပြင်တော့၊ ဒကာ ဒကာမတွေ ရုပ်က ကံကသေဆိုလည်း သေလိုက်ရုံပဲနော်.. ( မှန်ပါ့ ) ။
ကံကနေ အစားထိုးလို့ရှိရှင်ဆိုလည်း ... ( ရှင်ရမှာပါဘုရား ) ။
ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အဟာရကပြုပြင်ထားတဲ့ရုပ်
စိတ်ကနေပြီး ရုပ်ကို ရွှင်လန်းလိုက်ဆို၊ ရွှင်လန်းလိုက် ရုပ်တွေ ခုပဲပေါ်လာတာ... ( မှန်လှပါ ) ။
စိတ်ကခုပဲ ညှိုးသွားလို့ရှိရင် တစ်ခါတည်း ဒကာ ဒကာမတွေ ရုပ်တွေညှိုးလိုက်တယ်....( မှန်လှပါ )။
သြော်.. ဒါဖြင့် စိတ်သင်္ခါရကလည်း စိတ်ကလည်းပြုပြင်တဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်၊ ဒကာ ဒကာမ တွေ ရူပက္ခန္ဓာဆိုတဲ့ ရုပ်တရားသည်၊ သူများပြုပြင်တိုင်းခံရသောကြောင့် သင်္ခါရလို့ပဲ မှတ်ထားလိုက်တာပေါ့ .... ( မှန်လှပါ ) ။
ဥတုကပြုပြင်တာကော... ( ခံရပါတယ်ဘုရား ) ၊ ဥတုကအေးဆိုရင် အေးရုပ်တွေပေါ်လာတာ၊ ဥတုကပူတယ်ဆိုရင်... ( ပူရုပ်တွေပေါ်လာတာပါဘုရား ) ။
အဲဒါ ဥတုကပြုလုပ်ထားတဲ့ သင်္ခါရတရားဆိုရင်လည်း ငြင်းဖို့မလိုဘူး... ( မလိုပါဘူးဘုရား ) ၊ အာဟာရကပြုလုပ်ထားတဲ့သင်္ခါရတရားဆိုရင်ကော ... ( ငြင်းဖို့ မလိုပါဘူး ဘုရား ) ။
ကောင်းပြီ ဒါဖြင့် ရုပ်တရားမှာ အကြောင်းဘယ်နှစ်ပါးတုံး...( လေးပါးပါဘုရား ) ။
ဒါဖြင့် လေးပါးပြုပြင်လို့ ပေါ်လာတဲ့ တရားဖြစ်သောကြောင့် ဒကာ ဒကာမတွေ ရုပ်မှာ ဘယ်ရုပ်မဆို သင်္ခါရတရားလို့ မှတ်လိုက်စမ်းပါ ... ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ကောင်းပြီ ဒါ သင်္ခါရတရားလို့ မှတ်ထားတော့၊ ရုပ်သင်္ခါရ တရားလေးပါကျန်တယ်၊ နာမ်သင်္ခါရတရား လေးပါးကတော့ ဒကာ ဒကာမတို့ ဘယ်သူ့ကြောင့်ပေါ်သတုံးလို့ မေးဖို့မလိုဘူးလား... ( လိုပါတယ်ဘုရား ) ။
သူလည်း ပြုပြင်လို့ ပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်၊ နာမ်သင်္ခါရမှာတော့ ဒကာ ဒကာမတွေက မှတ်လိုက်တာပေါ့၊ နာမ်ဆိုတာသည် ဒကာ ဒကာမတို့ အာရုံဒွါရကြောင့်ဖြစ်သည်လို့ မှတ်ထားလိုက်တာပေါ့ .... ( မှန်လှပါ ) ။
အကျဉ်းချုပ်ဘယ်လိုမှတ်ထား ... ( အာရုံဒွါရကြောင့်ပါဘုရား ) ဦးခင်မောင်ရေ အာရုံဒွါရကြောင့် နော် ... ( မှန်လှပါ ) ။
နာမ်လေးတွေ ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်း ဘယ်သူ့ကြောင့်ပါလိမ့်... ( အာရုံဒွါရကြောင့်ပါဘုရား ) ။ လောကီဥပမာပြောကြပါစို့လို့ရှိရင်ဖြင့်၊ ဆိုင်းတီတဲ့လူများမှာ လင်းကွင်းနှစ်ခုကို ဒီအတိုင်းကိုင်နေတုံးက မြည်တဲ့သဘောမပေါ်လာဘူး.... ( မပေါ်ပါဘုရား ) ။
နှစ်ခုထိခိုက်တဲ့အခါကျတော့ ... ( ပေါ်လာပါတယ်ဘုရား ) အဲ နာမ်ဓမ္မဟာလည်း နှစ်ခုထိခိုက်တဲ့ အခါကျမှ ပေါ်သလို အာရုံဆိုတာ ဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရှိတယ် ။
ဒွါရဆိုတာလည်း မျက်လုံးအကြည်ရုပ်ကလေး၊ နားအကြည့်ရုပ်၊ ကိုယ်အကြည်ရုပ်၊ မနောအကြည် ရုပ်ဆိုတာက အခံဘက်က ... ( မှန်လှပါ ) ။
ဟိုက အဆင်းတို့၊ အသံတို့အမျိုးမျိုးက အတိုက်ဘက်ကပေါ့ဗျာ... ( မှန်လှပါ ) အဲတော့ အခံနဲ့အတိုက် နှစ်ခုတိုက်မှသာလျှင် မြင်စိတ်တို့ပေါ်နိုင်တယ်၊ ကြားစိတ်တို့ပေါ်နိုင်တယ်၊ နံစိတ်၊ ကြံစိတ်၊ စည်စိတ် အကုန်ပေါ်နိုင်တယ်... ( မှန်ပါ့ ) ။
ဒါဖြင့် နာမက္ခန္ဓာလေးပါးကတော့ဖြင့် အကြည်ခြောက်ပါးနဲ့ အာရုံခြောက်ပါးတိုက်လို့ ပေါ်တာပေါ့... ( မှန်လှပါ ) ၊ ဦးခင်မောင် ဘယ်လိုမှတ်ပါ့ ၊ ( အကြည်ခြောက်ပါးနဲ့ အာရုံ ခြောက်ပါးတိုက်လို့ ပေါ်တာပါဘုရား ) ရှင်းကြပလား... ( ရှင်းပါပြီဘုရား ) ။
ဒါဖြင့် နာမက္ခန္ဓာလေးပါးကလည်း သူ့မှာနှစ်ခုသော အကြောင်းကြောင့် ပေါ်လာရသည် ဖြစ်လေသော ကြောင့်၊ သူတို့ လေးခုကတော့ တစ်ပြိုင်နက် ပေါ်တာလို့ မှတ်နော်.. ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ကောင်းပြီ ဒကာ ဒကာမတို့ နာမ်တရားကတော့ကို အကြည်ခြောက်ခု မျက်လုံးထဲမှာ မျက်လုံးအကြည်ရုပ်ကလေးရှိတယ်... ( မှန်ပါ့ ) ။
နား အကြည်ရုပ်ကလေးရှိတယ်၊ ဒါလေးရှိလို့ ကြားတာနော် ( မှန်လှပါ ) နှာခေါင်းအကြည်၊ လျှာအကြည်၊ ကိုယ်အကြည်၊ မနောအကြည်ဆိုတဲ့ ဦးခင်မောင်ဘယ်နှစ်မျိုးရှိတုံး... ( ခြောက်မျိုးပါဘုရား ) ။
အကြည် ခြောက်မျိုးနဲ့ အပြင်ဘက်က မျက်လုံးအကြည်နဲ့ ရူပါရုံနဲ့ တည့်နေပြီ၊ ထိခိုက်ပြီဆိုမှဖြင့် မြင်စိတ်ကလေးပေါ်တယ် ( မှန်ပါ့ ) ၊ မြင်စိတ် နာမက္ခန္ဓာလေးပါး ... ( မှန်ပါ့ ) ။
ထို့အတူ နားအကြည်နဲ့ အသံနဲ့ တိုက်တဲ့အခါကျတော့ကို ကြားစိတ် နာမက္ခန္ဓာလေးပါးပေါ့ဗျာနော်၊ ထို့အတူ နံစိတ်၊ နာမက္ခန္ဓာလေးပါးလေ... ( မှန်ပါ့ ) ။
စားစိတ် .. ( နာမက္ခန္ဓာလေးပါးပါဘုရား ) ကိုယ်ပေါ်မှာ ပေါ်တဲ့စိတ်...( နာမက္ခန္ဓာ လေးပါပါဘုရား )၊ ၀မ်းထဲမှာကြံတွေးစိတ် ( နာမက္ခန္ဓာလေးပါးပါဘုရား ) ။
အဲ့ဒါ အကြည်နဲ့ အာရုံနဲ့ တိုက်လို့ချည့်ပဲ မှတ်လိုက်တာပေါ့ ( မှန်ပါ့ ) သြော်.. ဒါဖြင့် နာမက္ခန္ဓာလေး ပါးကလည်း အကြောင်းဘယ်နှစ်ကြောင်းပါလိမ့် .. ( နှစ်ကြောင်းပါဘုရား ) ။
နှစ်ကြောင်းက ပြုပြင်လို့ ပေါ်လာတာ... ( မှန်ပါ့ ) ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ဒကာ ဒကာမတွေ၏ စိတ်ဟာ၊ ငါ့စိတ်ဘာဖြစ်နေတယ်လို့ မပြောတတ်ပါဘူး၊ သား လေးချည့်မြင်နေတယ်၊ သမီးလေးချည့် မြင်နေ တယ်လို့ ငါ့စိတ်ဘာမှမဖြစ်ဘူး ။
ငါ့စိတ်ကိုလည်း မဟုတ်ဘူး.. ( တင်ပါ့ ) ဟိုသား တည်းဟူသော အာရုံနဲ့ ဒီကမနောအကြည်နဲ့ သွားပြီး တည့်တဲ့အခါမှာ သားကိုအောက်မေ့တဲ့ စိတ်တွေ၊ သမီးအောက်မေ့တဲ့စိတ်ကလေးတွေ ပေါ်လာ တယ်... ( မှန်ပါ့ ) ။
ဒါဖြင့် နှစ်ခုတိုက်လို့ပေါ်တာပေါ့ဗျာ .. ( မှန်ပါ့ ) ဒါဖြင့် သူလည်းသူများပြုပြင်လို့ ပေါ်တဲ့ တရားဖြစ် သောကြောင့် နာမ်ကိုလည်း သင်္ခါရတရားလို့ပဲဆိုလိုက်တော့ ... ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ဦးခင်မောင်ရှင်းပလား... ( မှန်လှပါဘုရား ) ဒါဖြင့် ရုပ်လဲသင်္ခါရတရား ဒကာ ဒကာမတို့၊ နာမ်ကော .... ( သင်္ခါရတရားပါဘုရား ) ။
အဲတော့ သြော် ဒီသင်္ခါရတရားရုပ်ကလည်း သင်္ခါရတရားနာမ်လေးပါးကလည်း ... ( သင်္ခါရတရားပါ ဘုရား ) ရှင်းကြပလား.. ( ရှင်းပါပြီဘုရား ) ။
ဒကာ ဒကာမတွေရှိတာ ရုပ်နဲ့ နာမ်ပဲရှိတယ်.. ( မှန်ပါ့ ) ရုပ်နဲ့ နာမ်နဲ့ပဲရှိတော့ သူများအကြောင်းလေး ပါးက ပြုပြင်တာ ... ( မှန်ပါ့ ) ။
နာမက္ခန္ဓာလေးပါးကျတော့ အကြောင်းနှစ်ပါးကပြုပြင်တာ၊ ဒါဖြင့် အကြောင်းလေးပါးက ပြုပြင်တာရုပ်၊ အကြောင်းနှစ်ပါးက ပြုပြင်တာက ( နာမ်ပါဘုရား ) ။
အဲဒီယခုတရားနာနေကြတာ ယောက်ျားတွေလား၊ မိန်းမတွေလား၊ ခန္ဓာငါးပါးလား၊ နာမ်ရုပ်တရား လားလို့မေးရင် ခန္ဓာငါးပါး၊ နာမ်ရုပ်နှစ်ပါးပါဘုရား ဆိုရုံပဲ... ( မှန်လှပါ ဘုရား ) သဘောကျပလား... ( ကျပါ တယ်ဘုရား ) ။
ခန္ဓာငါးပါး.... ( နာမ်ရုပ်နှစ်ပါးပါဘုရား ) နာမ်ရုပ်နှစ်ပါးပဲရှိတယ်၊ နာမ်နဲ့ ရုပ်ခွဲလိုက်တော့ ဒါကရုပ်၊ ဒီဘက်လေးပါးက နာမ်လေးပါးနဲ့ တစ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ ... ငါးပါး၊ ငါးပါးကျတော့ ခန္ဓာငါးပါးခေါ်လိုက်တာ ပေါ့... ( မှန်ပါ့ ) ။
နှစ်ပုံပုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ ရုပ်နာန်တရားဟာ ဦးဘတင်တို့ ဘာတရားလို့ခေါ်ကြမယ် ( သင်္ခါရ တရားပါဘုရား ) ။
သြော်.. သင်္ခါရတရား၊ ရုပ်တရားမှာ ဘယ်နှစ်ပါးက ပြုပြင်လို့ ပေါ်လာတုံး.. ( လေးပါးပါဘုရား ) နာမ်တရားမှာတော့ ... ( နှစ်ပါးပါဘုရား ) ။
သြော်... ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို၏ ခန္ဓာငါးပါးရုပ်နာမ်တရားသည် သင်္ခါရအစုကြီးပါလား.. ( မှန်လှပါ ဘုရား ) ဦးဝဘယ့်နှယ်ဆိုပါ့ .. ( သင်္ခါရအစုကြီးပါဘုရား ) ။
သင်္ခါရအစုကြီးနော်၊ ဒကာ ဒကာမတွေ ဘာအစုပါလိမ့်... ( သင်္ခါရအစုကြီးပါဘုရား ) သြော်... သင်္ခါ အစုကြီးဆိုတော့...
ဒကာ ဒကာမတွေ သန္တာန်မှာရှိတဲ့ သင်္ခါရအစုကြီးဟာ ကိုယ်လုပ်ထားတာ ဒီအထဲ ပါမှမပါတော့ပဲ ။ ပါသေးရဲ့ လား ... ( မပါပါဘုရား ) ။
ရုပ်တရားတွေမှာလည်း ပါသေးလား... ( မပါပါဘူးဘုရား ) နာမ်တရားတွေမှာလဲ .. ( မပါပါဘူး ဘုရား ) အင်းဘယ်လိုခေါ်ကြမယ်.၊ ဒါဖြင့် ... ( သင်္ခါရတရား ) သင်္ခါရတရား ။
သူများပြုပြင်လို့ ပေါ်ထားတဲ့ သင်္ခါရတရားဆိုတာ မှတ်လိုက်စမ်းပါ.. ( မှန်လှပါဘုရား ) အဲတော့ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက ဒီသင်္ခါရတရားတွေ မင်းတို့သည်ကားလို့ဆိုရင် သူများပြုပြင်ထားတာကို မျက်လုံးဟာငါပဲ။ နားဟာငါပဲ၊ ကြားတဲ့စိတ်ကလေးဟာငါပဲ၊ ကောင်းတာလဲငါပဲ၊ ဆိုးတာလဲ ငါပဲလို့ ။
ဝေဒနာတွေကိုလဲ ငါလို့ ဒီလိုမစွပ်စွဲကြပါနဲ့၊ ဒါသင်္ခါရတရားဟာ သင်္ခါရတရားလို့ပဲ ထားလိုက်စမ်းပါ ... ( မှန်ပါ့ ) ဒီအထဲငါဝင်မရှုပ်ပါနဲ့ဆိုတာ သတိပေးလိုက်တယ် ... ( မှန်ပါ့ ) ။
သင်္ခါရတရားကို... ( ငါဝင်မရှုပ်ရပါဘူးဘုရား ) ငါဝင်မရှုပ်နဲ့ သင်္ခါရတရားဟာ သင်္ခါရတရားပဲ ထားလိုက် ... ( မှန်ပါ့ ) ။
ငါဝင်ရှုပ်ရင်ဖြင့် ဦးဘတင် သက္ကာယဒိဋ္ဌိ... ( မှန်လှပါဘုရား ) ငါဝင်မရှုပ်ပဲထားလို့ရှိရင် သင်္ခါရတရား ပဲ ... ( မှန်ပါ့ ) ငါဝင်မရှုပ်ရင် ... ( သင်္ခါရတရားပါဘုရား ) ။
ဒီဟာတွေကို ငါလို့ထင်လိုက်ရင် ... ( သက္ကာယဒိဋ္ဌိပါဘုရား ) အဲတော့ကို ဒီနေ့ သက္ကယဒိဋ္ဌိကိုလည်း ဦးခင်မောင်အစက ဖြုတ်ပေးတာပါ ...( မှန်လှပါ ) ။
ကောင်းပြီ ဒါဖြင့် ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမတွေ၏ ခန္ဓာကိုယ်မှာ သင်္ခါရအစုကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် ဒကာသစ်တို့ လွဲသေးလား... ( မလွဲပါဘုရား ) ။
ကိုမြရွှေ ဘယ်လိုဆိုကြပါ့မယ်... ( သင်္ခါရအစုကြီးပါဘုရား ) သင်္ခါရအစုကြီး...( မှန်ပါ့ ) သင်္ခါရအစုကြီးဆိုတော့ သူများပြုပြင်ထားလို့ပေါ်နေတဲ့ အစုတရားကြီးလို့ဆိုလိုက်ရင် မလွဲတော့ဘူးပေါ့ ... ( မလွဲပါဘူးဘုရား ) ။
ကောင်းပြီ ဒါဖြင့် သင်္ခါရတရားမှန်းသိတဲ့အခါကျတော့ ၊ ဒီထဲငါနဲ့ဆိုင်ရင် ငါဆိုင် ငါပိုင်ဆိုတာသည် ဦးဝ မရှုပ်စေနဲ့နော်... ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ငါဆိုင် ငါပိုင်သည် .. ( မရှုပ်စေနဲ့ပါဘုရား ) မရှုပ်စေနဲ့ ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမတွေ လေးစားစွာနဲ့ ပဲ ဒီဥစ္စာကို ကန့်ကွက်တယ်... ( မှန်ပါ့ ) ။
ဘာကြောင့်တုံးဆိုတော့ ဆရာဘုန်းကြီးကရော၊ ဘုရားကရော ရုပ်တရားမှာလည်း အကြောင်းလေး ပါးက၊ ပြုပြင်ထားတာဆိုတာသိနေပြီ... ( မှန်ပါ့ ) ။
ရုပ်တရားမှာလည်း... ( အကြောင်းလေးပါးက ပြုပြင်ထားတာပါဘုရား ) ၊ နာမ်တရားမှာ အကြောင်း နှစ်ပါးက... ( ပြုပြင်ထားတာပါဘုရား ) ။
အဲတော့ ခင်ဗျားတို့က ရုပ်ဟာငါပဲ၊ ဝေဒနာဟာငါပဲ၊ စိတ်ဟာငါပဲ၊ သညာငါပဲလို့ ဦးခင်မောင်တို့က မရှုပ်စေနဲ့နော်... ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ဒကာ ဒကာမတို့ ဘုန်းကြီးဘယ်လို ကန့်ကွက်ပါလိမ့် ... ( ငါပဲလို့ မရှုပ်ရပါဘုရား ) မရှုပ်စေနဲ့ ... ( မှန်ပါ့ ) ရှုပ်လို့ရှိရင် ဘုန်းကြီးများက စိုးရိမ်တယ်၊ သူများပစ္စည်းကိုယ်ခိုးယူတာ၊ သူများပစ္စည်း....( ကိုယ်ခိုးယူ တာပါဘုရား ) ။
ဒကာ ဒကာမတို့ သူများပစ္စည်း ကိုယ်ခိုးယူတယ်ဆိုတော့၊ သူများဆိုတာက ဦးခင်မောင်သိပြီ၊ ရုပ်တရားကိုလည်း ပြုပြင်ထားတာ လေးပါးရှိတယ် ... ( မှန်ပါ့ဘုရား ) ။
အဲဒါသူများကျတာ ... ( မှန်ပါ့ ) မကျဘူးလား... ( ကျပါတယ်ဘုရား ) နာမ်တရားကလည်း ပြုပြင် ထားတာ နှစ်ပါးမရှိဘူးလား.... ( ရှိပါတယ်ဘုရား ) ။
အဲ သူတို့နှစ်ပါးက ပြုပြင်ထားလို့ ခေတ္တယာယီပေါ်နေတဲ့ သင်္ခါရတရားကို၊ ငါပိုင်၊ ငါဆိုင်၊ ငါ့မထိနဲ့၊ ငါ့ကိုယ်ငါ ပိုင်တယ် ။
အံမလေး၊ ကြွားလုံးတွေ ၀ါလုံးတွေက သိပ်များတယ်.... ( မှန်လှပါဘုရား ) ငါ့ကိုယ်ငါပိုင်တယ်လို့ဆို ပြီး ငါသွားချင်ရာသွားနိုင်တယ်၊ ငါအိပ်ချင်ရာ အိပ်နိုင်တယ်၊ ငါစားချင်ရာ စားနိုင်တယ် အစရှိသည်နဲ့ သင်္ခါရ တရားမှန်း မသိတော့ ငါဝင်ရှုပ်နေတယ် .. ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
သင်္ခါရတရားမှန်းမသိတော့ ( ငါဝင်ရှုပ်နေပါတယ် ဘုရား ) မရှုပ်ကြစမ်းပါနဲ့ ဒကာ ဒကာမတို့၊ မရှုပ်ကြစမ်းပါနဲ့လို့ သတိပေးလိုက်ပါတယ် ... ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ဘယ်လို သတိပေးပါလိမ့် ( မရှုပ်ကြစမ်းပါနဲ့လို့ သတိပေးလိုက်ပါတယ်ဘုရား ) ။ မရှုပ်တော့ပါဘူးလို့ ဘုရားလို့ ဦးခင်မောင်တို့ တာဝန်ခံရမယ် ... ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ပြောတဲ့အရှုပ်မဟုတ်ဘူး၊ ထင်တဲ့ အရှုပ်မပါစေနဲ့... ( မှန်လှပါဘုရား ) ပြောတာကတော့ ပြောတာ ပေါ့ ဦးခင်မောင်ရ ( မှန်လှပါ ) ။
ငါသူမှ မပြောလို့ရှိရင်လည်း ပြောစရာမရှိလို့... ( မှန်လှပါဘုရား ) ပြောတာတော့ ပြောပါတော့ တကယ်တော့ အထင်စွဲပြီးသကာလ မပြောလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာ ကန့်ကွက်လိုက်တယ်... ( မှန်လှပါဘုရား ) သဘောပါကြပလား...( ပါ ပါတယ်ဘုရား ) ။
အကယ်၍ တကယ်ထင်မဲ့ကြံရင်၊ ခု ဆရာဘုန်းကြီးဟောထားတဲ့၊ သြော် ရုပ်တရားမှာ အကြောင်း လေးပါးက ပြုပြင်လို့ ပေါ်နေတာ ( မှန်လှပါ ) နာမ်တရားမှာ ( အကြောင်းနှစ်ပါးက ပြုပြင်လို့ ပေါ်နေတာပါ ဘုရား ) ။
အာရုံ ဒွါရဆိုတဲ့ အကြောင်းနှစ်ပါးက ပြုပြင်လို့ပေါ်နေတာဖြစ်သောကြောင့် ၊ ရုပ်နဲ့ နာမ်ပဲ ရှိတော့ကို၊ အင်း သူတစ်ပါး ပြုပြင်ထားတဲ့ သင်္ခါရတရားတွေကို ၊ ငါတော့ဖြင့် ရှုပ်လို့မတော်တာ အမှန်ပဲလို့ ယနေ့ ဆုံး ဖြတ်ချက်ချပါ... ( မှန်လှပါဘုရား ) သဘောကျပလား ... ( ကျပါတယ် ဘုရား ) ။
ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖြစ်အောင်ချပါနော်.. ( မှန်လှပါဘုရား ) ဘယ့်နှယ်ကြောင့် ဒီလောက် ဆရာဘုန်းကြီး ကလေးစားစွာနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတင်ချခိုင်းပါလိမ့်မတုံးဆိုတော့ ကမ္ဘာနဲ့မြေဇာဆိုသလို... ၊
ခင်ဗျားတို့က ခန္ဓာငါးပါး ငါ့ကိုယ် ငါ့ဟာ ထင်လာကြတယ် ( မှန်လှပါဘုရား ) ဒီအကြောင်းတွေ မသိ ခြင်းကြောင့် ငါ့ကိုယ် ငါ့ဟာ ထင်လာကြတယ်... ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ဦးခင်မောင် သဘောကျပလား... ( ကျပါတယ် ဘုရား ) ဒီအကြောင်းတွေ မသိသောကြောင့် ... ( ငါ့ကိုယ်၊ ငါ့ဟာ ထင်လာတာပါဘုရား ) ခုတော့ ဒီအကြောင်းတွေ မနေ့က တစ်ဝက်သိခဲ့ရပြီ၊ ဒီနေ့ တစ်ဝက် သိတော့ အကြောင်းဟာ စုံသွားတယ် ... ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
စုံစုံကြီးသိလိုက်ရတဲ့အတွက် ဦးဘတင်ရေ တကယ်လို့ထင်မယ့်ကြံရင် ဒီအကြောင်းတွေ ပြန်ပြန်တွေးလိုက်စမ်းပါ ... ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ပြန်တွေးလိုက်သည်နဲ့ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ငါ့ကိုယ် ငါ့ဟာဆိုတဲ့ ဒိဋ္ဌိတို့ တဏှာတို့ဟာ ပြုတ်ထွက်သွားတယ်...( မှန်လှပါဘုရား ) အကြောင်းနဲ့ တကွ သိလို့ ဖြုတ်လို့ရတာနော်... ( မှန်လှပါဘုရား )။
ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချကြမယ်... ( အကြောင်းနဲ့ တကွ သိလို့ဖြုတ်ချလို့ ရတာပါဘုရား ) အကြောင်းနဲ့ တကွ သိပြီး ဖြုတ်ရမှ မင်းတို့ ရုပ်နာမ်ကြီးဟာကွာ၊ မင်းတို့ဟာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ သာမညပြောတဲ့တရားနဲ့ တွေ့ ရင် ဒကာသစ်တို့ ဦးမြရွှေတို့ လွဲမယ်နော်...( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ခုတော့ဖြင့် အကြောင်းတရားလေးပါးက ပြုပြင်တာက ရုပ်၊ အကြောင်းနှစ်ပါးပြုပြင်တာက နာမ်၊ သဘောကျပလား...( ကျပါတယ်ဘုရား ) ။
အခု ဒကာ ဒကာမတွေ ထိုင်နေကြတဲ့ဟာ နာမ်ရုပ်ပဲရှိတယ်.( မှန်လှပါဘုရား ) ဖြန့်လိုက်ရင် ခန္ဓာငါးပါးပဲရှိတယ်၊ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်များပါကြရဲ့ လား... ( မပါပါဘူးဘုရား ) ။
ကိုယ်လုပ်ထားတာများ ပါကြရဲ့ လား...( မပါပါဘူးဘုရား ) မပါသောကြောင့် ဒီထဲမှာ ငါ၊ ငါ့ဥစ္စာ၊ ၀င်မရှုပ်လိုက်ပါနဲ့ .... ( မှန်လှပါဘုရား ) သဘောပါပလား.... ( ပါပါတယ်ဘုရား ) ။
ဘာမရှုပ်ပါနဲ့... ( ငါ၊ ငါ့ဥစ္စာ ၀င်မရှုပ်ရပါဘုရား ) ငါ၊ ငါ့ဥစ္စာ ၀င်မရှုပ်ပါနဲ့ဆိုတာကို ကန့်ကွက်တယ်... ( မှန်ပါ့ ) ။
အကယ်၍ ဆရာဘုန်းကြီးက မကန့်ကွက်လိုက်လိုရှိရင်၊ ဒကာ ဒကာမတို့ ခင်ဗျားတို့ဟာ သူများပစ္စည်း ရုပ်ဟာလည်း ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အဟာရကပိုင်တယ် ...( မှန်ပါ့ဘုရား ) ။
နာမ်ကို အာရုံဒွါရကပိုင်တယ်...( မှန်လှပါဘုရား ) ဦးခင်မောင် ဆိုထိုက်ပလား... ( ဆိုထိုက်ပါတယ် ဘုရား ) ၊ အဲတော့ သူတစ်ပါးပစ္စည်းကို ခင်ဗျာတို့က အတင်းဝင်လုတာနဲ့ မတူဘူးလား...( တူပါတယ်ဘုရား ) အတင်းဝင်လုလိုက်တဲ့ အခါကျလို့ရှိရင်လည်းတဲ့ ...
ဒကာ ဒကာမတို့သည် အင်မတန်မှ မှားပါတယ် .. ( မှန်ပါ ) မှားလုံးကလေးကို အကွက်ကျကျလေး ဦးဘတင် ပြောဦးမယ်...( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ဘယ်လောက်ထိအောင် ဒကာ ဒကာမတွေ ဆရာကောင်း၊ သမားကောင်းနဲ့ မကြုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် သူများပစ္စည်းခိုးချက် ဘယ်လောက်သန်တယ်ဆိုတာ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ။
သူများပစ္စည်းရှင်းပြီးပြီနော်... ( မှန်လှပါဘုရား ) ဦးခင်မောင် ရှုပ်သေးလား... ( မရှုပါဘူးဘုရား ) မရှုပ်တော့ဘူးတဲ့ ။
ကဲ - ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတွေ သန္တာန်ဝမ်းထဲမှာ ရှိတာက ငါဆိုတဲ့ တရားလေးဟာက ဒိဋ္ဌိငါကိုးဗျ .... ( မှန်လှပါ ) ။
အဲဒီငါဟာ ဒါ ငါပဲလို့ ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် ၀မ်းထဲမှာ ရှိတဲ့ ဒိဋ္ဌိက ငါနော်... ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ဒါဖြင့် ငါဟာ ဆိုတာနဲ့ ရုပ်ဆိုတာနဲ့ ရောသွားလိမ့်မယ်...( မှန်လှပါဘုရား ) ၊ ဒကာ ဒကာမတွေ ၀မ်းထဲမှာရှိတာက ငါ၊ ဒီဟာကိုလည်း ငါဆိုတော့ ရုပ်ကိုလည်း ငါဆိုတော့ ၊ သြော် - ဒါဖြင့် ငါသည်ကားလို့ ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ အင်မတန် ခက်သွားပြီ ။
ရုပ်တရားကလည်း သူများက လုပ်ထားတာ၊ ခင်ဗျားတို့ကလည်း ဒါ ငါလုပ်ပြန်တယ် .. ( မှန်လှပါ ဘုရား ) ရုပ်တရားဟာ ငါပဲလို့ လုပ်လိုက်တယ် ... ( မှန်လှပါ ) ငါ့ ဥစ္စာပဲလို့ လုပ်လိုက်ပြန်တယ် ။
ဦးခင်မောင်... ( မှန်လှပါ ) မလုပ်လိုက်ဘူးလား ...( လုပ်လိုက်ပါတယ်ဘုရား ) အဲတော့ သူများလုပ် ထားတဲ့ ဥစ္စာကြီးကို ၊ ငါ - ငါ့ဥစ္စာလို့ ခင်ဗျားတို့က အတင်အဓမ္မလုတာနဲ့ကော ... ( တူပါတယ်ဘုရား ) ။
အဲတော့ အတင်းအဓမ္မလုတာနဲ့ တူတာလည်း တစ်ကြောင်း၊ မလုကောင်းတာလည်း ပင်ကိုယ် အကြောင်းကလည်း ကိုယ်နဲ့လားလားမှမဆိုင်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်လဲ ရှင်းနေပြီ... ( မှန်ပါ့ ) မရှင်းဘူးလား.. ( ရှင်းပါ တယ်ဘုရား ) ။
အဲဒီကဲ့သို့ ရှင်းပြီးထားတော့မှ သြော်.. ဒါဖြင့် ခင်ဗျားတို့ ၀မ်းထဲမှာရှိတဲ့ ငါဆိုတာက ဒိဋ္ဌိ.. ( မှန်ပါ့ ) ဘယ်မှာတုံး မင်းတို့ဥစ္စာဆိုတော့ ရုပ်ဟာ ငါပဲ၊ ငါ့ဥစ္စာပဲ ဒီလိုမယူကြပေဘူးလား... ( ယူပါတယ်ဘုရား ) ။
စိတ်ဟာလည်း ငါပဲ၊ ငါ့ဥစ္စာပဲလို့ မယူကြပေဘူးလား ... ( ယူပါတယ်ဘုရား ) ။
အဲတော့ ဒကာ ဒကာမတို့ ငါက ဒိဋ္ဌိငါ့ဥစ္စာက ရုပ်.. ( မှန်ပါ့ ) ဟ, ဦးခင်မောင် လွဲကုန်ပြီ... ( မှန်လှပါ ) ၊ မလွဲသေးဘူးလား...( လွဲပါတယ်ဘုရား ) ။
ငါက ဒိဋ္ဌိ၊ အဲဒီ ဒိဋ္ဌိက ဒီဥစ္စာ ရုပ်တရားကို သူက ငါပဲ ငါ့ဥစ္စာပဲလို့ ဦးဘတင် စွဲလိုက်တယ်.. ( မှန်လှ ပါဘုရား ) စွဲလိုက်တော့ ငါတည်းဟူသောသူခိုး ၀င်ခိုးတာမသေချာဘူးလား...( သေချာပါတယ်ဘုရား ) ။
အဲ့ဒါ သတ္တ၀ါတွေ အပါယ်ရောက်ရတာ၊ သူမဆိုင်တာကိုဝင်ပြီးသကာလ အုပ်စည်းချင်တဲ့အတွက်၊ ခိုးမှုကြောင့် အပါယ်ရောက်ရတယ်... ( မှန်လှပါဘုရား ) .။
ဒါဖြင့် ဒိဋ္ဌိကသူခိုး ... ( မှန်လှပါ ) ၊ ရှင်ပလား ... ( ရှင်းပါပြီဘုရား ) ဒိဋ္ဌိကဘာပါလိမ့် ( သူခိုးပါ ဘုရား ) ဒိဋ္ဌိက သူခိုးဆိုတာ သေချာပလား ... ( သေချာပါတယ်ဘုရား ) ။
သူများလုပ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းကို သူက ငါ ငါ့ဥစ္စာဝင်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက် သူခိုး ခိုးတတ်တဲ့ ဒိဋ္ဌိကြောင့် ဒကာ ဒကာမတွေဟာ အပါယ်ရောက်ရပါတယ် ... ( မှန်လှပါ ဘုရား ) ။
ဒါဖြင့် ဦးခင်မောင်ရေ အပါယ်ရောက်ခြင်း အကြောင်း ယနေ့ပေါ်သွားပြီ .. ( မှန်လှပါဘုရား ) သူတစ်ပါး လုပ်ထားတာကို ..ငါ ငါ့ဥစ္စာလို့ ခိုးယူသောကြောင့် ... ( မှန်လှပါ ) ဒကာ ဒကာမတွေ ဘာဖြစ်ရ တုံး ( အပါယ်ရောက်ရပါတယ်ဘုရား ) ။
ဒါဖြင့် ခင်ဗျားတို့သည် တစ်သံသရာလုံးက ဒီခိုးမှုကြီးဟာ သင့်လာတော့ အပါယ်မှာနေရတာ များတယ်ဆိုတော ယနေ့ သေချာတော့မယ်.. ( မှန်လှပါဘုရား ) သေချာကြပလား... ( သေချာပါတယ် ဘုရား ) ။
တစ်သံသရာလုံး ငါ ငါ့ဥစ္စာပဲ ဦးဘတင်တို့ ဒကာသစ်တို့ ကိုမြရွှေတို့ ထင်လာကြတယ် . ( မှန်လှပါ ဘုရား ) ဘယ်တော့မှလည်း မပြုတ်ခဲ့ဘူး..( မှန်ပါ့ ) ။
ပြုတ်ခဲ့ရဲ့ လား.. ( မပြုတ်ခဲ့ပါဘူးဘုရား ) မပြုတ်ခဲ့တော့ သံသရာမှာ ဒီလူတွေဟာ သူတစ်ပါးပစ္စည်း ခိုးမှုတည်းဟူသော အပြစ်သင့်သောကြောင့် ခိုးပြစ်သင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် အပါယ်သွားရတာလည်း သေချာပြီး သကာလနေသောကြောင့် သြော်... တို့သည်ကားလို့ ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် အမြင်မှားကြောင့် အပါယ်ရောက်ရတယ် ဆိုတာလည်း မှန်တာပါပဲ ... ( မှန်ပါ့ဘုရား ) ။
သူတစ်ပါး ပစ္စည်းခိုမှုကြောင့် အပါယ်ရောက်ရတယ်ဆိုတာကော.. ( မှန်ပါတယ်ဘုရား ) အမြင်မှားတွေနဲ့ ခိုးလိုက်တာကိုး... ( မှန်ပါ့ ) သဘောကျပလား ... ( ကျပါတယ် ဘုရား ) ။
ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ သတ္တ၀ါတွေ အမြဲနေတာ ဘယ်မှာတဲ့ ဆရာဘုန်းကြီးဟောတာ .. ( အပါယ် မှာပါဘုရား ) ဘယ့်နှယ့်ကြောင့် အပါယ်မှာ နေရသတုံးဆိုတဲ့ အမေးထုတ်လိုက်တဲ့အခါ စစ်တမ်းထုတ်လိုက် တဲ့အခါကျတော့မှ ဦးဝတို့ ပေါ်လာတယ်.. ( ပေါ်လာပါတယ်ဘုရား ) ။
တစ်သံသရာလုံး သူများပစ္စည်းကို ခိုးခိုးလာကြတယ်ဘုရား ( မှန်လှပါဘုရား ) ဆိုထိုက်ပလား... ( ဆိုထိုက်ပါတယ်ဘုရား ) ။
ဘယ်ဘ၀ လွတ်ခဲ့သတုံးလို့ အမေးထုတ်ရင် ( ဘယ်ဘ၀မှ မလွတ်ခဲ့ပါဘူးဘုရား ) ။
ဒါလူ့ပြည်တက်လာလိုက် ခိုးလိုက်၊ ဟုတ်လား ၊ နတ်ပြည်တက်လာလိုက်ခိုးလိုက်၊ အပါယ်ရောက် လိုက်၊ တက်လာပြန် အပါယ်က နှိပ်စက်လို့ ပြန်တက်လာပြန် အခိုးဝါသနာ မစွန့်တဲ့အတွက် ဘယ်ပြန်ရောက် ရတုံး.. ( အပါယ်ပြန်ရောက်ပါတယ်ဘုရား ) ။
အပါယ်ပဲ ပြန်ရောက်ရမယ်ဆိုတာ သေချာကြပလား... ( သေချာပါတယ်ဘုရား ) ။
သြော်... ဒါဖြင့် ဒကာဒကာမတွေ ဒီဘ၀တွေမှာ ဒီ ဒိဋ္ဌိတည်းဟူသော သူခိုး ခင်ဗျားတို့ ရှင်းပေးမယ့် လူ မလာလို့ ရှိရင်ဖြင့် ခိုးမြဲပဲ ခိုးနေဦးမှာပဲ ... ( မှန်လှပါဘုရား ) ဦးစံရင်တို့ ရှင်းပလား... ( ရှင်းပါပြီဘုရား ) ။
သတ္တ၀ါတွေ အမြဲနေတာ ဘယ်မှာတဲ့တုံး
ဒိဋ္ဌိသူခိုးဟာ သေချာကြပလား ... ( သေချာပါတယ် ဘုရား ) ကောင်းပြီ ဒါဖြင့် သတ္တ၀ါတွေ အမြဲနေ တာဘယ်မှာတဲ့တုံး... ( အပါယ်လေးပါး ပါဘုရား ) ။
ဒါဖြင့် ကျသင့် ၊ မကျသင့်လည်း အကဲခတ်ကြပါဦး .. ( ကျသင့်ပါတယ်ဘုရား ) ဦးဘတင် အသေ အချာ အကဲခတ်စမ်း... ( ကျသင့်ပါတယ်ဘုရား ) ။
သူများပစ္စည်းကို ခိုးတဲ့ဥစ္စာဗျာ မကျဘူးဆိုရမှာလား ပစ္စုပ္ပန်တောင် ရာဇ၀တ်သင့်သေးတာ ဦးခင်မောင်ရေ .. ( မှန်လှပါ ) ။
သံသရာမှာ သံသရာပြစ်သင့်ရမယ်.... ( မှန်လှပါ ) ၊ မသင့်ပါနဲ့လို့ ဆိုလို့ ... ( မရပါဘူးဘုရား ) ဒကာ ဒကာမတွေ လေးလေးစားစားမှတ်ပါ ။
ဒိဋ္ဌိအပါယ်ချပုံဟာ ခင်ဗျားတို့က သြော်. မှားလို့ အပါယ်ချတယ်ဆိုတာ မှားပုံကို ကွက်ကွက် ကွင်းကွင်း ပေါ်အောင်ပြောနေပါတယ် .. ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
အရင်တော့ မှားလို့ အပါယ်ကျတယ်၊ အမြင်မှားလို့ အပါယ်ရောက်တယ်၊ ဒီလောက်ပဲ သိကြတယ် .... ( မှန်ပါ့ ) ခုဟာက အမြင်မှားပြီးသကာလ သူ့ဟာပိုင် လုပ်တဲ့အတွက်လည်း ဦးခင်မောင် အပါယ်ရောက် ရတယ် ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
အမြင်မှားပြီး သူ့ဟာပိုင် မလုပ်လိုက်ဘူးလား.. ( လုပ်လိုက်ပါတယ်ဘုရား ) ငါ့ကိုယ် ငါ့ဟာ လုပ်မပစ် လိုက်ဘူးလား... ( လုပ်ပစ်ပါတယ်ဘုရား ) ။
အဲ ငါ့ကိုယ် ငါ့ဟာ လုပ်ပစ်လိုက်တာက ငါ့ကိုယ် ငါ့ဟာ ဒီထဲမှာ တစ်ပဲသား ပါပါရဲ့ လား...( မပါ ပါဘူး ဘုရား ) ။
ရုပ်ကြည့်ပြန်တော့ ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အဟာရက လုပ်ထားတယ်... ( မှန်လှပါဘုရား ) ၊ နာမ်ကြည့်ပြန် တော့ အာရုံဒွါရက လုပ်ထားတယ်၊ ရှင်းပလား...( ရှင်းပါပြီ ဘုရား ) ။
ဒါဖြင့် ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမတွေ တစ်သံသရာလုံး အပါယ်ကမတက်ရတာသည်ကားလို့ဆိုရင်၊ အခိုးဝါသနာ မစွန့်နိုင်သ၍ ကာလာပတ်လုံး၊ ဘယ်တော့မှ သံသရာထဲက ထွက်နိုင်လိမ့်မယ်၊ ရုန်းနိုင်လိမ့် မယ်၊ ကန်နိုင်လိမ့်မယ်၊ ကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကို မယုံပါနဲ့တော့ ... ( မှန်လှပါဘုရား ) ၊ သဘောကျ ပလား... ( ကျပါတယ်ဘုရား ) ။
ကောင်းပြီ ဒါဖြင့် ဦးဘတင်သေတော့လည်း ဒါ ငါ့ကိုယ် ငါ့ဟာ ဆိုတဲ့ ခိုးမှုကြီးကို လက်လွှတ်သေ သွားသလား၊ ရာဇ၀တ်မှု တန်းလန်းနဲ့သေသွားသလား... ( ရာဇ၀တ်မှုတန်းလန်းနဲ့ သေသွားပါတယ်ဘုရား )။
ဒါဖြင့် ဦးခင်မောင် ကျသင့်တယ်ဗျာ ... ( ကျသင့်ပါတယ် ) သက ထုချေစရာကို ကျုပ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ ပါသေးရဲ့ လား ... ( မပါ ပါဘူးဘုရား )။
ခိုးထုပ် ခိုးထည်နဲ့ တကွ မမိဘူးလား.. ( မိပါတယ် ဘုရား ) ။အဲ ခိုးထုပ် ခိုးထည်နဲ့တကွ မစွန့်ပဲနဲ့ ဦးဘတင်ရ သေသွားလို့အပါယ်ရောက်ရတာ ... ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ကွာသွားရဲ့ လား ဒိဋ္ဌိက ... ( မကွာပါဘူးဘုရား ) ငါခက်ရချည်ရဲ့  ငါ့ကိုယ်ကြီးနဲ့ ခွဲရချည်ရဲ့  ငါ့ကိုယ်ကြီးနဲ့ ငါမခွဲချင်ဘူး ။
ဆိုပြီးသကာလ ငါ့ကိုယ် ငါ့ဟာလုပ်ပြီးသကာလ ခိုးမှုကြောင့် ခိုးမှု အထုပ်အထည်ကို လက်မလွှတ်ပဲ နဲ့ တစ်ခါတည်းသေပွဲဝင်သွားတယ် .. ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ဦးခင်မောင် ဒိဋ္ဌိဘယ်လောက်ဆိုးတုံး.. ( ဆိုးပါတယ်ဘုရား ) အဲ ကိုမြရွှေတို့ ကောင်းကောင်းကျေ နပ်ပလား... ( ကျေနပ်ပါတယ်ဘုရား ) ။
သြော်... အပါယ်ဟာ ရောက်သင့် မရောက်သင့်စဉ်းစားကြစမ်းပါ ( ရောက်သင့်ပါတယ်ဘုရား ) ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်က ဘာပြစ်သင့်တုံး .... ( ခိုးပြစ်သင့်ပါတယ်ဘုရား ) ခိုးပြစ်သင့်နေတယ်ကွ ရိပ်မိပလား... ( ရိပ်မိပါတယ်ဘုရား )။
သူများပစ္စည်းကို ခိုးတဲ့အခါကျတော့ကို ဒီခိုးတဲ့ပစ္စည်းကိုပဲ ခိုးမှန်းသိပြီး နောက်မခိုးတော့ပါဘူး ဆိုပြီး သေသွားတာလား၊ ခိုးထုပ်ခိုးထည်နဲ့ သေသွားတာလား... ( ခိုးထုပ်ခိုးထည်နဲ့သေသွားတာပါဘုရား ) ။
ကိုင်း - ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးဆိုတာ သေချာပလား... ( သေချာပါတယ် ဘုရား ) ရှင်းပလား... ( ရှင်းပါပြီ ဘုရား ) ။
အဲတော့ကိုး ခင်ဗျားတို့ နောက်တုန်းက လှူခဲ့တန်းခဲ့၊ ပေးခဲ့၊ ကမ်းခဲ့တာတွေ နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တာ အမှန်ပါပဲ .... ( မှန်ပါ့ ) ။
ဦးခင်မောင် ရောက်နိုင်ပါတယ်နော်... ( ရောက်နိုင်ပါတယ် ) သို့သော် ခိုးထုပ် ခိုးထည်နဲ့တကွ မိပြီး သကာလ သေပွဲဝင်ရတဲ့ အခါကျတော့ သူကချည့် အပါယ်ဆွဲချသွားတယ်.... ( မှန်လှပါ ဘုရား ) သဘော ကျကြပလား ... ( ကျပါတယ်ဘုရား ) ။
သူကချည့် အပါယ်ဆွဲချသွားတယ်ဆိုတော့ ခိုးထုပ်ခိုးထည်နဲ့ချည့်ပဲ သေသွားတယ်လို့ ဦးဝ ဆိုထိုက် ပါပြီ.... ( ဆိုထိုက်ပါတယ်ဘုရား ) ဆိုထိုက်ကြပလာ..... ( ဆိုထိုက်ပါတယ် ဘုရား ) ။
အဲဒါဘုရားတစ်ခါ တစ်ခါပွင့်မှ၊ ဆရာကောင်း သမားကောင်းနဲ့ တစ်ခါ တစ်ခါကြုံမှ သြော်... ရုပ်ဟာ အကြောင်းလေးပါးကြောင့် ဖြစ်တာ၊ ငါ့ကိုယ် ငါ့ဟာ မဟုတ်ဘူးဟ... သဘောကျပလား... ( ကျပါတယ် ဘုရား ) ။
နာမ်ကလည်း အကြောင်းနှစ်ပါးကြောင့် ဖြစ်တာ ငါ့ကိုယ်၊ ငါ့ဟာ မဟုတ်ဘူးဟ ... ( မှန်လှပါ ) အံမာ ဒီလို တစ်ခါ တစ်ခါလေး လာတာနော်... ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ဘယ့်နှယ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြမယ် .. ( တစ်ခါတစ်ခါလေး လာတာပါဘုရား ) ရှင်းကြပလား.... ( ရှင်း ပါတယ်ဘုရား ) ။
ငါလုပ်ထားတာ မဟုတ်လို့ ငါမပိုင်ဘူး
ကိုင်း ဒါဖြင့် ဘုန်းကြီးပြောပါပြီ ၊ ဒကာ ဒကာမတို့ ယနေ့ ဘယ်လိုများ ပိုင်သွားသတုံးဆိုတော့ ဒကာ ဒကာမတွေ နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ ဘယ်လိုများ ပိုင်သွားသတုံးဆိုတော့ သြော် ...အစကကိုက ငါလုပ်ထားတာ မဟုတ်လို့ ငါမပိုင်ဘူး... ( မှန်ပါ့ ) ။
ဆိုနိုင်မဆိုနိုင် .. ( ဆိုနိုင်ပါတယ်ဘုရား ) အစကငါလုပ်ထားတာမဟုတ်လို့ .. ( ငါမပိုင်ဘူးဘုရား ) ရုပ်လည်းမပိုင်ဘူး၊ နာမ်ကော... ( မပိုင်ပါဘူးဘုရား ) ။
ဟာ ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတွေ ဒီဥစ္စာ မပိုင်မှန်းသိလို့ရှိရင် ဒီရုပ်ရော၊ နာမ်ရော အနတ္တ ဖြစ်ပါတယ် ၊ ... ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
မပိုင်မှန်းသိတဲ့အတွက် ဘာတုံး... ( အနတ္တဖြစ်ပါတယ် ဘုရား )သြော်ခင်ဗျားတို့က အိုးကွဲသွားတော့ မှ အနတ္တဖြစ်နေတာ ခက်တာက ။
လူသေသွားမှ အနတ္တဖြစ်နေတာ ဒီအရှင်ကိုက ခင်ဗျားတို့ အရှင်မဟုတ်ဘူး... ( မှန်ပါ့ ) ၊ သဘောကျပလား... ( ကျပါပြီဘုရား ) ။
ရှင်တော့ ရှင်နေတာပဲ ၊ ရှင်တုန်းကကိုက ခင်ဗျားမဟုတ်ဘူး.. ( မှန်လှပါဘုရား ) ၊ သဘောကျပလား ( ကျပါတယ်ဘုရား ) ။
ခုတော့ သားသေမှ အနတ္တမို့ လက်လျှော့လိုက်တယ်၊ သမီးသေမှ အနတ္တမို့ လက်လျှော့လိုက်ရ တယ်၊ အိုးကွဲ မှ အနတ္တလက်လျှော့်လိုက်ရတယ် ။
သစ်ပင်တွေလဲသွားမှ ကိုယ် အနတ္တလက်လျှော့လိုက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးက ဦးဘတင် မမှန်ဘူးနော် ... ( မမှန်ပါဘုရား ) မမှန်ဘူးတဲ့ ။
ခု အစောကြီးမပျက်စီးခင်ကကိုက ရုပ်နာမ်တွေ မပျက်စီးခင်ကိုက ဘာမှတ်ကြမယ်...( အနတ္တပါ ဘုရား ) ။ကိုယ်မဆိုင်ဘူးနော် သေချာကြပလား... ( သေချာပါပြီဘုရား ) ။
ရုပ်ပေါ်လည်း... ( မဆိုင်ပါဘူးဘုရား ) မဆိုင်ပါဘူး ဒကာ ဒကာမတို့ ဆိုင်တယ်ထင်ရင် အကြောင်း လေးပါးပေါ့ဗျာ... ( မှန်လှပါ ) နာမ်ပေါ်ရင်ကော ဆိုင်ပါရဲ့ လား ... ( မဆိုင်ပါဘူးဘုရား ) ။
အဲ ဆိုင်တယ်ဆိုရင် အကြောင်းနှစ်ပါးပေါ့ ... ( မှန်ပါ့ ) ဆိုင်ချင်ရင်လေ ... ( မှန်လှပါ ) ။
ကိုင်း - ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ဒီခန္ဓာငါးပါး တရားနာနေတဲ့ ဒကာ ဒကာမတို့၏ ခန္ဓာငါးပါးဟာ အခု ဥာဏ်နဲ့ကြည့်ပါ၊ တစ်ခုမျ ကိုယ်ပိုင်မပါသောကြောင့် အနတ္တလို့သာ မှတ်ထားလိုက် ... ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ရုပ်တရားလည်း... ( အနတ္တပါဘုရား ) ခု လျှောက်နေတဲ့စိတ်တွေကကော... ( အနတ္တပါဘုရား ) ၊ ထွက်လာတဲ့အသံလေးကကော ... ( အနတ္တပါဘုရား ) ။
ထိုင်နေတဲ့ သဘောလေးကကော ... ( အနတ္တပါဘုရား ) သြော် ဦးခင်မောင် အနတ္တချည့်ပဲ ။
ကောင်းပြီ ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ အနတ္တတော့ ဒကာ ဒကာမတွေ ကောင်းကောင်းပိုင်ပြီ၊ ယနေ့ အစောကြီးပဲ ရှင်းပေးလိုက်တာနဲ့ အနတ္တကောင်းကောင်းပိုင်သွားတယ်... ( မှန်ပါ့ ဘုရား ) ။
လက္ခဏာ မပိုင်သေးဘူး... ( မှန်လှပါဘုရား ) ဦးခင်မောင် ဘာမပိုင်ပဲ ဖြစ်နေတုံး. ( လက္ခဏာ မပိုင် ပဲ ဖြစ်နေပါတယ် ဘုရား ) ။
အနတ္တတော့ ပိုင်တယ် ဒကာ ဒကာမတွေ လက္ခဏာမပိုင်သေးဘူး... ( မှန်လှပါ ) ကိုမြရွှေ ဒါရှေ့ ကို ဆက်နားထောင်ပါ ( မှန်လှပါဘုရား ) တော်တော် အရေးကြီးလို့ ပြောနေတယ် .. ( မှန်လှပါ ) ။
ဒကာ ဒကာမတွေ ခုသိထားတာကတော့ အနာတော့သိပြီ ၊ ကိုယ်လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူး၊ သူတစ် ပါးလုပ်ထားတာ ဖြစ်လေသောကြောင့် မပိုင်ဘူးဆိုဒါ တော့သိတယ်... ( မှန်လှပါ ) ဦးခင်မောင် ရှင်းပလား .. ( ရှင်းပါပြီဘုရား ) ။
အဲတော့ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက အနတ္တ၊ ဝေဒနာ၊ အနတ္တ၊ သညာ အနတ္တ၊ အနတ္တ တွေ ဟောရှာပါတယ် ။
မင်းတို့ သန္တာန်ရှိတဲ့ ခန္ဒာငါးပါးဟာ ဘယ်လိုဟောတုံး ( အနတ္တပါဘုရား ) အနတ္တလို့ ဟောလိုက် တယ်တဲ့ ဒကာ ဒကာမတွေလဲ ယ္ခုတော့ဖြင့် ယနေ့ သဘောကျပြီ ။
နာမ်တရားလေး စားချင်တဲ့ စိတ်ကလေးပေါ်လာတာကလည်း ဘာပါလိမ့် ... ( အနတ္တပါဘုရား ) အင်း... ပူတဲ့ရုပ်ကလေး ပေါ်လာတာကော.. ( အနတ္တပါဘုရား ) ။
အင်း ကောင်းတာလေး ပေါ်လာရင်... ( အနတ္တပါဘုရား ) သူတစ်ပါး လုပ်တာချည့်ကိုးဗျ... ( မှန်လှပါ ) ဦးခင်မောင် ဘယ်လိုဆိုပါ့မတုံး ... ( သူတစ်ပါးလုပ်တာချည့်ပါဘုရား ) ။
သူတစ်ပါးလုပ်ထားတာချည့် အကုန်စုနေတာချည့်ပဲ၊ ဒကာ ဒကာမတွေက ကိုယ်ပိုင်လုပ်စရာတော့ အချက်အလက်အကွက်တော့ မပါတော့ပါဘူး... ( မှန်လှပါ ) ပါသေးရဲ့ လား... ( မပါ ပါဘူးဘုရား ) ။
ဒါဖြင့် သြော်.. အနတ္တဆိုတာက တို့ခန္ဓာငါးပါးပါလားဆိုတာ ယနေ့တော့ဖြင့် ရှင်းသွားပြီ...( ရှင်းပါပြီ ဘုရား ) ။
ဦးခင်မောင်ရေ အနတ္တက ဘာတဲ့ဗျာ.. ( ခန္ဓာငါးပါးပါဘုရား ) လက်ရှိခန္ဓာငါးပါး.. ( မှန်လှပါ ) လက်ရှိ ခန္ဓာငါးပါးနော် ကိုယ်တောင် မထည့်လိုက်ပါနဲ့ လက်ရှိခန္ဓာငါးပါး .. ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ဦးဝ ... ( လက်ရှိခန္ဓာငါးပါးပါဘုရား ) အခု ရှိနေတဲ့ ခန္ဓာငါးပါး .. ( မှန်လှပါဘုရား ) ကောင်းပြီ ခုရှိနေ တဲ့ခန္ဒာငါးပါးကို အနတ္တတရားလို့ မှတ်လိုက်တာပေါ့ ... ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ဒီ အနတ္တက ဦးခင်မောင်ရေ ဆဆက္ကသုတ်မှာလာတဲ့ အနတ္တကို ဟောနေတယ်နော်.. ( မှန်လှပါ ဘုရား ) ကောင်းပြီ ဒါဖြင့် ခန္ဓာငါးပါးကို အနတ္တတရားလို့ မှတ်လိုက်တာပေါ့ ... ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ခန္ဓာငါးပါးကို .. ( အနတ္တတရားပါဘုရား ) ဦးဘတင် လက္ခဏာ မပေါ်သေးပါဘူး... လက္ခဏာ မပေါ်သေးပါဘူး ဒကာ ဒကာမတွေ လက္ခဏာ ရှင်းပြပါဦးမယ် .. ( မှန်ပါ့ ) ။
ဘုရားက အနတ္တလက္ခဏာသုတ်လို့ မဟောပဲ ၊ ဘယ်လိုဟောပါလိမ့် အနတ္တလက္ခဏာသုတ်လို့ ဟောတယ်.. ( မှန်လှပါ ) ဘယ်လိုဟောပါလိမ့် ( အနတ္တ လက္ခဏာသုတ်ပါ ဘုရား ) ။
အနတ္တလက္ခဏာသုတ်လို့ ဟောကို မဟောဘူး.. ( မဟောပါဘူးဘုရား ) သဘောကျပလား.... ( ကျ ပါတယ်ဘုရား ) ။
ဘယ်လို ဟောပါလိမ့် ... ( အနတ္တလက္ခဏာသုတ်လို့ ဟောပါတယ်ဘုရား ) ဒါဖြင့် ကျုပ်တို့က အနတ္တ တစ်ပိုင်းပဲ သိသေးတယ် ဦးဘတင်တို့က လက္ခဏာမသိသေးပါဘူး... ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ဦးခင်မောင် ကျေနပ်ပလား... ( ကျေနပ်ပါတယ် ဘုရား ) ဒါ အသေအချာ စစ်ထုတ်တာပဲ ဒကာ ဒကာမတို့၊ မသိမရှိအောင်ပဲ တစ်ခါတည်း ဒီနေ့နာရတာ ဒကာ ဒကာမတွေ သြော် .. တို့ခန္ဓာငါးပါး အပြော တို့ခန္ဓာငါးပါးနော် အရှိကတော့ဖြင့် ကိုယ်နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်တာ အနတ္တသဘောသက်သက် ဧကန်ပါပဲဆိုတာ ပေါ်ကြပလား... ( ပေါ်ပါပြီဘုရား ) ။
ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ဦးခင်မောင် ရှေ့ တစ်ဆင့်တက်တော့မယ်၊( မှန်လှပါဘုရား ) ဘယ်တက်မယ် ဆိုတာ ဒကာ ဒကာမတွေ ရိပ်မိကြပါတော့ လက္ခဏာပြတော့မယ် ... ( မှန်လှပါဘုရား ) သဘောကျပလား.. ( ကျပါတယ်ဘုရား ) ။
ကောင်းပြီ ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ အိုး ဘယ်သူလုပ်သတုံးမေးလို့ရှိရင်ဖြင့် ၊ ဒကာ ဒကာမတို့ အိုးဘယ်သူလုပ်သတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် အိုးဖြစ်လာအောင်၊ ရေထည့်တဲ့အခြေနေရောက်အောင် ခိုင်လာအောင် အင်း မီးကလုပ်တယ် ... ( မှန်လှပါ ) ။
အိုး ဘယ်သူလုပ်ပါလိမ့် ... ( မီကလုပ်ပါတယ်ဘုရား ) ဒါကြောင့်လည်း အိုးဖြစ်လာခဲ့တယ်နော်၊ လူက ဆိုတာကတော့ ဖေးကာ၊ မ,ကာပါ ။
တကယ်တမ်း လူချည့်သက်သက်နဲ့ ဦးဘတင်အိုးဖြစ်နှိုင်ပါ့မလား... ( မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘုရား ) တကယ်ခိုင်ခန့် တည့်တံ့အောင် လုပ်လာတာ ဘယ်သူက လုပ်တာတုံး .. ( မီးကပါဘုရား ) ။
ကောင်းပြီ ဒါဖြင့် အိုးကိုမီးကလုပ်တယ် .. ( မှန်ပါ့ ) မီးကလုပ်ပြီးသကာလ ဒီအိုးသည်ကားလို့ ဆိုလို့ ရှိရင်ဖြင့် မီးတည်းဟူသော အကြောင်းက လုပ်ထားသောကြောင့် အိုး ဖြစ်လာတယ် ။
အိုးသည်ကားလို့ ဆိုရင်ဖြင့် မြေအိုးဖြစ်လေသောကြောင့် အင်း လေတိုက်လို့သော်လည်းကောင်း၊ လွတ်ကျ၍သော်လည်းကောင်း၊ အင်း နေပူမိုးရွာနဲ့ ပျမ်းမျှကြေး နေပူလွန်းအားကြီးလို့ အက်ရသော်လည်း ကောင်း၊ အင်း ရေထိသွားလို့ ပျော်ရသော်လည်းကောင်းဆိုတော့ လာနေပြီဗျ.. ( မှန်လှပါ ).. မလာရပေဘူး လား .. ( လာရပါတယ်ဘုရား ) ။
ဒါဖြင့် သူများလုပ်ထားသောကြောင့် ဒကာ ဒကာမတို့ အနတ္တဖြစ်လေသောကြောင့် သူသည် မခိုင် တဲ့သဘောတစ်ခုခုပြောပြလိမ့်မယ်.. ( မှန်လှပါ ) ။ ပြောမသွားပေဘူးလား ( ပြောပါတယ်ဘုရား ) ။
ပြောသွားတဲ့အခါကျတော့မှ သြော် နဂိုရှိတုန်းက အနတ္တ၊ သူ့ပင်ကိုသဘော စွန့်သွားတော့မှ လက္ခဏာ၊ ရှိနေတုံးက .. ( အနတ္တပါဘုရား ) ။
သူ့သဘောလေးစွန့်သွားတော့ ... ( လက္ခဏာပါဘုရား ) သြော် ဒါဖြင့် အနတ္တကို သိရုံနဲ့ မပြီးသေး ဘူး၊ လက္ခဏာရောက်မှသာလျှင် နေရာကျတော့မယ် ... ( မှန်လှပါဘုရား )၊ သဘောပါကြရဲ့ လား... ( ပါပါ တယ်ဘုရား ) ။
ခန္ဓာငါးပါးဟာ ပင်ကို ရှိနေတုန်းကတော့ ဘယ်လိုမှတ်ကြမယ်.. ( အနတ္တပါဘုရား ) ဖျတ်ဆိုရုပ်က လေးကလဲ ပျက်စီးသွားတယ် ။
စိတ်ကလေးကလည်း ခုပေါ် ခုပျက်စီးသွားတယ်၊ ပျက်စီးသွားတဲ့အခါကျတော့ ဘာပေါ်လာတုံး.. ( လက္ခဏာပေါ်လာပါတယ်ဘုရား ) ။
သြော်.. ဒါနှစ်ခုပေါင်းမှသာလျှင် အနတ္တနဲ့လက္ခဏာနဲ့ဟာ ပြည့်စုံတယ်.. ( မှန်လှပါ )။
ဦးခင်မောင်... ( မှန်လှပါ ) နှစ်ခုပေါင်းမှ ပြည့်စုံတယ်။ တစ်ခုတည်း သိထားတော့ အနတ္တပဲသိတယ် ... ( မှန်လှပါဘုရား ) နောက်ကျတော့ အနတ္တလက္ခဏာကို သူပြလိုက်တယ် ။
ကျုပ်ဟာ ခင်ဗျားတို့ မပိုင်ကြောင်းကိုရှင်းသထက်ရှင်းအောင်ပြပါဦးမယ်ဆိုပြီး နာမ်ကလေးကလည်း ဖျတ်ဆို ပျောက်ပျက်သွားတယ် .. ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ရုပ်ကလေးလည်း .. ( ပျောက်ပျက်သွားပါတယ်ဘုရား ) ၊ ပျောက်ပျက်သွားတဲ့အခါကျတော့ ဒကာ ဒကာမတွေက သြော် နဂိုကလည်း မပိုင်တာ မပိုင်တဲ့သဘော ဗောလောကြီးပေါ်အာင်ပဲ ပြောသွားတယ်ဆို တဲ့ အဓိပ္ပါယ်မရဘူးလား... ( ရပါတယ်ဘုရား ) ။
နဂိုကလည်း ဘာတုံး... ( မပိုင်ပါဘူးဘုရား ) နဂိုက မပိုင်တော့ကို ကြည့်ရင်မတ္တနဲ့ပဲ မပိုင်တဲ့သဘော ကိုရှင်းသထက်ရှင်းအောင် ဓမ္မက ပြောသွားပြန်တယ် ... ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ဘယ်သူကပြောသွားတုံး.. ( ဓမ္မကပြောသွားပါတယ်ဘုရား ) ဓမ္မကပြောသွားတော့ ဦးခင်မောင်တို့ က ခေါင်းညိတ်ရမယ် ... ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
သြော်... အနတ္တလည်း ဟုတ်ပါပေတယ်၊ လက္ခဏာလည်းဆိုက်ပါပေတယ်၊ သူ့လက္ခဏာလည်း ပြပါ ပေတယ် ( မှန်လှပါ ) ဘယ့်နှယ်ဆိုကြမယ်.... ( သူ့လက္ခဏာလည်း ပြပါတယ်ဘုရား ) ။
ပင်ကို ရှိနေတုံးကဘာတဲ့.. ( အနတ္တပါဘုရား ) အင်းနောက်ကျတော့ ဒကာ ဒကာမတွေ ကိုယ့်စိတ် ကလေးက စားချင်တဲ့စိတ်ကလေးက ဖျတ်ဆိုပျောက်သွားတယ် ။
အိပ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးက ဖျတ်ဆိုပျောက်သွားတယ် ( မှန်ပါ့ ) အင်း ပေါ်လာတုန်းက အနတ္တပေါ့ဗျာ .... ( မှန်ပါ့ ) နောက်ပျောက်သွားတဲ့ အခါကျတော့ ... ( လက္ခဏာပြပါတယ်ဘုရား ) လက္ခဏာပြသွားတယ် ။
လက္ခဏာပြသွားတော့မှ ဦးခင်မောင်တို့က ဦးဘတင်တို့က ဥာဏ်ကလေးနဲ့ ခေါင်းညိတ်စမ်းပါ .. ( မှန်လှပါဘုရား ) အနတ္တလက္ခဏာဖြင့်ကွာ အနတ္တပေါ်လည်း ယုံပါရဲ့ ၊ လက္ခဏာပေါ်မှာလည်း တကယ့်ကိုပဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပါရဲ့  သဘောကျပလား ... ( ကျပါတယ်ဘုရား) ။
အနတ္တဆိုတာလည်း .. ( ယုံပါတယ်ဘုရား ) ၊ လက္ခဏာကလည်း မှန်လိုက်တာ... ( မှန်ပါ့ ) ။
ဘယ်သူ့သဘော၊ ဘယ်သူ့အကြိုက် သူလုက်သေးသတုံး... ( မလိုက်ပါဘုရား ) နာမ်ဓမ္မ၊ ရုပ်ဓမ္မက လေ...( မလိုက်ပါဘူးဘုရား ) ။
မည့်သူ့သဘော မည်သူ့အကြိုက်မှ ဒကာသစ်တို့ကို ဦးမြရွှေတို့ လိုက်သေးရဲ့ လား ... ( မလိုက်ပါဘူး ဘုရား ) အဲဒီမလိုက်တာက သူ့လက္ခဏာပြောတာ .. ( မှန်ပါ့ ) ။
ဒါဖြင့်ဒကာ ဒကာမတို့ အနတ္တနဲ့ လက္ခဏာကောကွဲပါပလား...( ကွဲပါတယ်ဘုရား )။ ဦးခင်မောင် ဒီဥစ္စာသိပ်အရေးကြီးတယ်... ( အရေးကြီးပါတယ် ဘုရား ) ။
ဒကာ ဒကာမတွေ အရေးမကြီးတဲ့နေ့ မပါဘူးနော် .. ( မှန်လှပါ ) အရေးမကြီးတဲ့နေ့မပါဘူး၊ သေသေချာချာ ဂရုစိုက်ပြီးနားထောင်ပါ၊ ဒီနေ့ ဒီနှစ်လုံးကို ရေလည်အောင်ပြောမှာပဲ ဒါနဲ့ နိဗ္ဗာန်ဝင်အောင် ပြောရမှာပဲ... ( မှန်ပါ့ ) ။
ကိုင်း - ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ခန္ဓာထဲမှာ ဘာလေးပေါ်လာပေါ်လာအစ ဘာခေါ်ကြမယ်.. ( အနတ္တ ပါဘုရား ) ၊ ပျောက်သွားရင် ဘာဆိုကြမယ် .. ( လက္ခဏာပါဘုရား ) ။
အဲ ပျောက်သွားတော့ လက္ခဏာသိတယ်၊ ပေါ်တော့အနတ္တသိတယ်၊ ပျောက်တော့ .. ( လက္ခဏာ သိပါတယ်ဘုရား ) ပေါ်တော့ .. ( အနတ္တ သိပါတယ်ဘုရား ) ပျောက်သွားတော့ .. ( လက္ခဏာသိပါတယ် ဘုရား ) ။
အဲဒီလို လက္ခဏာ သိမှသာလျှင် ဒါဖြင့် လက္ခဏာက ဘာလက္ခဏာတုံးဆိုတော့ အနတ္တ၏ လက္ခဏာ၊ ဦးဘတင် ဘာတဲ့ .. ( အနတ္တ၏ လက္ခဏာပါဘုရား ) ။
အနတ္တ၏ လက္ခဏာဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့က အင်း အနတ္တ၏ လက္ခဏာ ကလေးကို ဥာဏ်ကလေးနဲ့တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့၊ အနတ္တ၏ လက္ခဏာလေးကို ဓမ္မကပြောသွားတဲ့အခါကျ တော့၊ ဦးခင်မောင် တို့သြော် အနတ္တ၏ လက္ခဏာရှင်းလိုက်တာ .. ( မှန်လှပါ ) ။
မဆိုနိုင်ဘူးလား.. ( ဆိုနိုင်ပါတယ် ဘုရား ) ဦးဝ ... ( ဆိုနိုင်ပါတယ်ဘုရား ) ၊ ဒီရှင်းလိုက်တာ ဆိုတာ လေးဟာ အနတ္တလက္ခဏာသိတဲ့ အနတ္တလက္ခဏာဥာဏ်.. ( မှန်ပါ့ ) ။ သဘောကျပလား... ( ကျပါတယ် ဘုရား ) ။
ရှင်းလိုက်တာလေး ဆိုတာက ဘာပါလိမ့် .. ( အနတ္တလက္ခဏာဥာဏ်ပါဘုရား ) ၊ အနတ္တလက္ခဏာ ဥာဏ်.. ( မှန်ပါ့ ) ရှင်းပလား.. ( ရှင်းပါပြီ ဘုရား ) ။
သြော် ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ခင်ဗျားတို့ အနတ္တလက္ခဏာဥာဏ်ရတော့မှ ခုနင်က အတ္တပြုတ်သွား တာကိုး .... ( မှန်လှပါ ) အတ္တပြုတ်သွားတယ်၊ အနတ္တလက္ခဏာဥာဏ်ရလိုက်တဲ့အခါကျတော့ ဘာပြုတ် သွားတုံး.. ( အတ္တပြုတ်သွားပါတယ်ဘုရား ) ။
အတ္တဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ် သဘောကျကြပလား.. ( ကျပါတယ်ဘုရား ) ရှင်းအောင် ပြောနေပြီ ( မှန်ပါ့ ) အင်မတန် ရှင်းအောင်ပြောနေတယ်ဆိုတာ ယုံကြပလား.. ( ယုံပါတယ်ဘုရား ) ။
ကဲ - ဒါဖြင့် ဓမ္မလေးတစ်ခု ပေါ်လာတယ်၊ ခန္ဓာထဲမှာ ရုပ်ကလေး ရုပ်အသစ်ပေါ်လာတယ်၊ နာမ်အသစ် ပေါ်လာတယ်ဆိုကြမယ် .. ( အနတ္တပါဘုရား ) ။
ပျောက်သွားတော့ ဘာတွေများပြောသတုံး... ( လက္ခဏာပြောသွားပါတယ်ဘုရား )၊ လက္ခဏာ ပြောသွားတော့ ခင်ဗျားတို့က မသိလိုက်ဘူးလား...( သိပါတယ်ဘုရား ) ။
ဒါဖြင့် ခင်ဗျားတို့ သိလုံးကလေးဟာ ဘာပါလိမ့်မတုံးဆိုတော့ အို ဒါဥာဏ်သိလုံးလေးကို ( မှန်ပါ့ ) အနတ္တလက္ခဏာဥာဏ်လေးတွေ ( မှန်ပါ့ ) ။
ဘယ်လို ဆိုကြမယ် ( အနတ္တလက္ခဏာဥာဏ်လေး တွေပါဘုရား ) အို.. အနတ္တလက္ခဏာ ဥာဏ် လေးရလိုက်တယ်ဆိုကတည်းက အတ္တဒိဋ္ဌိ နင်သွားတော့ဟယ်လို့ ငါ့ကိုယ် ငါ့ဟာထင်တာ နင်သွားတော့လို့ မောင်းရသေးရဲ့ လား.. ( မမောင်းရပါဘူးဘုရား ) ။
မမောင်းရပါဘူး ဒကာ ဒကာမတို့ ကောင်းကောင်းသဘောကျပလား.. ( ကျပါတယ်ဘုရား ) ။
ဒါဖြင့် ပေါ်လာရင် ဘာဆိုကြ.. ( အနတ္တပါဘုရား ) ပျက်ပြတော့ .. ( လက္ခဏာပါဘုရား ) ၊ သဘောကျပလား... ( ကျပါတယ်ဘုရား ) ။
ကိုင်း.. အနတ္တမှ မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ လက္ခဏာသိဖို့ ဦးဘတင်တို့ .. ( မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘုရား ) မဖြစ်နိုင် ဘူး။ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ ခုအသေအချာ စစ်ပြောတော့မှ ပေါ်လာတာ .. ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
နို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့် ဒကာ ဒကာမတွေက သူတို့ အိုးကွဲသွားတော့မှ သားလေး၊ သမီးလေး စွန့်ပစ်လိုက်ရမှ အို အနတ္တမို့ လက်လျှော့လိုက်ရတယ် ဆိုတာက နဂိုက အနတ္တသူသိခဲ့တာမဟုတ်ဘူး .. ( မှန်လှပါဘုရား ) သဘောပါကြပလား.. ( ပါ ပါတယ်ဘုရား ) ။
နဂိုကိုက ဘာတုံး.. ( အနတ္တပါဘုရား ) နဂိုကိုက ခန္ဓာငါးပါးဟာဘာတရားတုံး..( အနတ္တပါဘုရား ) ။
အဲတော့ သူတို့ကသေမှ အနတ္တမို့ မတတ်နိုင်လို့ စွန့်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ နဂိုက အတ္တရှိတယ် သူ့မှာ ( မှန်လှပါဘုရား ) ဒါဖြင့် အတ္တက အတော်ရှည်နပြီ .. ( မှန်ပါ့ ) မရှည်ဘူးလား ... ( ရှည်ပါတယ်ဘုရား ) ။
ဟို.. တကယ်တမ်း ဒေါမနဿနဲ့ စွန့်လိုက်တော့မှ အနတ္တမို့ လက်လျှော့လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ ဥစ္စာကျ တော့ သူသည် အနတ္တမသိပါဘူး .. ( မှန်ပါ့ ) ။
မသိတဲ့အတွက် လက္ခဏာကိုလည်း မသိတဲ့အတွက် တစ်ခါတည်း မျက်ရည်ကျတယ်.. ( မှန်လှပါ ဘုရား ) မျက်ရည်ကျပြီး စိတ်ထဲ ဒေါမနဿတွေ ဖြစ်လာတယ် .. ( မှန်ပါ့ ) ။
မကျေနပ်ပဲ သုံးနှစ်သုံးလီ မမေ့နိုင်တဲ့ ဒေါမနဿအကြီးဆုံးဖြစ်လာတယ် ( မှန်လှပါ ) အဲဒါ ဘာမသိ တာတုံးဆိုတာ ရိပ်မိပလား.. အနတ္တတုန်းကလည်း မသိခဲ့ဘူး.. ( မှန်ပါ ) လက္ခဏာပြတော့ကော.. ( မသိပါ ဘူးဘုရား ) ။
ဒါဖြင့် ခင်ဗျားတို့ ဘုရားအဆူဆူနဲ့ လွဲခဲ့တာဟာ ယနေ့ဖြင့် ကောင်းကောင်းပေါ်ပါပြီ.. ( မှန်လှပါ ဘုရား ) ။
အနတ္တ ခန္ဓာလို့လဲ မသိခဲ့ဘူး၊ အနတ္တ၏ ခန္ဓာက လက္ခဏာကို ပြလိုက်ပြန်တော့လည်း ခင်ဗျားတို့ အပါယ်သွားဖို့ချည်းဖြစ်နေတယ် .. ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ဦးခင်မောင် ဘယ်လိုဆိုမယ်.. ( အပါယ်သွားဖို့ချည်းပါဘုရား ) ဘယ့်နှယ်ကြောင့် အပါယ်သွားဖို့ ဖြစ်ရတုံးလို့ မေးတဲ့အခါကျမှ ဦးဘတင် အနတ္တကို မသိလို့ လက္ခဏာပြတော့ကော အပါယ်သွားတာပဲ .. ( မှန်လှပါဘုရား )၊ ရှင်းပလား .. ( ရှင်းပါပြီဘုရား ) ။
အနတ္တကို မသိခဲ့လို့ .. ( လက္ခဏာပြတော့ အပါယ်သွားပါတယ်ဘုရား ) ကိုင်း ဒီဥစ္စာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပြီ၊ ဒကာ ဒကာမတို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီ မချသေးဘူးလား .. ( ကျပါတယ်ဘုရား ) ။
နဂိုက ဘာမသိခဲ့တုံး.. ( အနတ္တမသိခဲ့ပါဘူးဘုရား ) ဘယ်သိမတုံးဗျ ဒီလိုဆရာသမားကောင်းနဲ့ ရုပ်မှာအကြောင်းတရားလေးပါးက ပြုပြင်ထားတာ၊ မင်းတုိ့ဟာ မဟုတ်ဘူး အစောကြီးက မသိဘူး... ( မှန်ပါ့ ) ။
နာမ်မှာ အကြောင်းတရားနှစ်ပါးက ပြုပြင်ထားတာမင်းတို့ဟာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဒီလိုက သိမထားတော့ ကို ဒီလို ပင်ပေါ်လာတာလေးကို ကံကောင်းလို့ သားကောင်းလေးထွန်းကားလာတယ်၊ သမီးကောင်းလေး ထွန်းကားလာတယ် ။
ကံ ပေါ်မှာချည့် ယူချလိုက်တယ် .. ( မှန်လှပါဘုရား ) သဘောကျပလား .. ( ကျပါတယ်ဘုရား ) ကံ ပေါ်မှာချည့် ယူချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ ကမ္မ၀ါဒီ ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ် ( မှန်ပါ့ ) ။
ဒီကံချည့် ပြုပြင်လို့ရတာလားဆိုတော့ ဒီကလေး၏ ရုပ်နာမ်မှာ ဦးဘတင် လေးပါးမနေလားဗျာ ( လေးပါးပါဘုရား ) လေးပါးတစ်ပါးယူတော့ သူဒိဋ္ဌိ ဟုတ်မဟုတ် ..( ဟုတ်ပါတယ်ဘုရား ) သဘောကျပလား.. ( ကျပါတယ်ဘုရား ) ။
လေးပါးတစ်ပါးထဲယူတော့ ( ဒိဋ္ဌိပါဘုရား ) ဒိဋ္ဌိပဲ ဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတာ အကြောင်းမစုံလို့ ဖြစ်ရတာချည့်မှတ် .. ( မှန်ပါ့ ဘုရား ) ။
ကောင်းပြီ ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ဘုရားအဆူဆူနဲ့ လွဲခဲ့တာ အနတ္တလည်း မသိခဲ့လို့ပါဘုရား ၊ လက္ခဏာပြတော့လည်း ဘုရားနဲ့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရား ၊ ရိပ်မိပလား.. ( ရိပ်မိပါတယ်ဘုရား ) ။
ဒါကြပ်ကြပ်စဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့ သေချာစဉ်းစား၊ သေချာစဉ်းစား ၊ ဘုန်းကြီးက ဒကာ ဒကာမတွေ ၀မ်းထဲမှာ ဒီအတိုင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ ဥစ္စာကိုပဲ တစ်သံသရာလုံးက ဒီအတိုင်း ရှိတယ်လို့ ဦးဘတင် ရှင်းအောင် ပြောနေတာ.. ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
အနတ္တကော သူတို့သိရဲ့ လား .. ( မသိပါဘူးဘုရား ) ကဲ အနတ္တမသိတဲ့အတွက် လက္ခဏာပြလိုက် သည်နဲ့ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဒကာ ဒကာမတွေ ဘုရားနဲ့ ရန်ဖြစ်တရားနဲ့ရန်ဖြစ်တယ်.. ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
မဖြစ်သေးဘူးလား၊ ဖြစ်လား.. ( ဖြစ်ပါတယ်ဘုရား ) ဘာကြောင့် လက္ခဏာပြတော့ တရားနဲ့ ရန်ဖြစ် လိမ့်မတုံး ဘုရားနဲ့ ရန်ဖြစ်ပါလိမ့်မတုံး မေးကြည့်စမ်း ဦးဘတင်...
အနတ္တမသိလို့ ၊ မူလအနတ္တကို မသိလို့ .. ( မှန်ပါ့ ) ရှင်းပလား.. ( ရှင်းပါပြီဘုရား ) ဘာမသိတာပါ လိမ့် .. ( မူလ အနတ္တကို မသိတာပါဘုရား ) ။
ဒါဖြင့် ခင်ဗျားတို့သည် အနတ္တလည်းမသိ၊ လက္ခဏာလည်းမသိပဲ ဖြစ်ပြီး နေခဲ့တော့၊ အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့ အမြဲ နေခဲ့လေရဲ့ ၊ ဒါကြောင့် အပါယ်မြဲတယ် .. ( မှန်ပါ့ဘုရား ) ။
သတ္တုချပြီ ၊ ဦးဘတင် .. ( မှန်လှပါ ) သတ္တုချပြီ ဆိုတော့ ဒီမရောက်သေးဘူးလား .. ( ရောက်ပါ တယ်ဘုရား ) သေသေချာချာ ရောက်ပြီနော် ဒကာ ဒကာမတို့ ( မှန်လှပါ ) ။
အသေအချာ မရောက်သးဘူးလား.. ( ရောက်ပါတယ်ဘုရား ) ကောင်းပြီ၊ ဒါဖြင့် ယနေ့ ရှင်းရတာ ၀ိပဿနာရှုတဲ့ နေရာမှာဖြင့် ခင်ဗျားတို့ ချက်ချင်းပဲ မဂ်ဖိုလ်ဆိုက်အောင်လို့ ဒီဥာဏ်ကိုရှေ့ က ပြောနေတာ .. ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ဒီဥာဏ်ကိုရှေ့ ကပြောနေတာ၊ တစ်လုံးထဲမိလိုက်ရင် ကိစ္စပြီးအောင်လို့ ဦးခင်မောင်ရဲ့  အရေးတကြီး ပြောနေတာနော်.. ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ကိုင်း . ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ခန္ဓာ ငါးပါးဟာ ရှိနေတုန်း ဘာတရားခေါ်ကြမယ် .. ( အနတ္တပါဘုရား ) ။
ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသွားရင် .. ( လက္ခဏာပါ ဘုရား ) ကောင်းပြီ ဒါဖြင့် အနတ္တနဲ့ လက္ခဏာဆိုတာ ကောရှင်းသွားပလား ... ( ရှင်းပါပြီဘုရား ) ။
အဲဒီ လက္ခဏာ အနတ္တကိုလည်းသိ၊ လာက္ခဏာကိုလည်းသိတဲ့ ဥာဏ်မှသာလျှင် ဘာဥာဏ်ခေါ်ကြ မယ် .. ( အနတ္တလက္ခဏာဥာဏ်ပါဘုရား ) ။
အံမလေး ဦးဘတင်တို့ မနည်းပြောရပါလား ( မှန်လှပါဘုရား ) အနတ္တလက္ခဏာ ဥာဏ်ကလေးဖြစ် ဖို့ကို အနတ္တကို မသိတုန်းကလည်း ဥာဏ်မလာနိုင်ဘူးဗျ.. ( မှန်လှပါ ) ။
လက္ခဏာကို မပြင်ရင်လည်း.. ( ဥာဏ်မလာပါဘူး ဘုရား ) ဥာဏ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတော့ အနတ္တလက္ခဏာဥာဏ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာ အနတ္တလဲ သိဦးမှ လက္ခဏာလဲ ( သိဦးမှာပါဘုရား ) ။
ဒါမှ ဘာဥာဏ်ဖြစ်မတုံး.. ( အနတ္တလက္ခဏာဥာဏ်ပါဘုရား ) အဲဒီဥာဏ်ကမှလဲ ခုနက အတ္တိဒိဋ္ဌိ ဖြုတ်နိုင်တာကိုးဗျ.. ( မှန်လှပါ )၊ နို့မဟုတ်ရင် ဖြုတ်နိုင်ပါ့မလား .. ( မဖြုတ်နိုင်ပါဘူးဘုရား ) ။
သြော် ဒကာ ဒကာမတွေ နားကြီးကြီးနဲ့ ထောင်ပြီး ဒီတရားတစ်လုံးတည်းနဲ့ ခင်ဗျားတို့ လိုရာခရီး ဆိုက်တော့မယ်ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ ( မှန်လှပါဘုရား ) ရှင်းပလား ဥာဏ်ထဲမှာ ... ( ရှင်းပါပြီဘုရား ) ။
အသေအချာ ရှင်းကြပါ၊ အသေအချာ ရှင်းကြပါ၊ မရှင်းပြန်ပြောနေမှာပဲ.. ( မှန်ပါ့ ) မရှင်းရင်တော့ ရှင်းသထက်ရှင်းအောင် ပြောရမှာပဲ .. ( မှန်လှပါ ) ။
ခန္ဓာငါးပါး တစ်ပါးပါးပေါ်ရင် အနတ္တ
ခုတော့ သေချာပလား.. ( သေချာပါပြီဘုရား ) တရားဓမ္မကလေးတွေ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမျာ ခန္ဓာငါးပါး တစ်ပါးပါးပေါ်ရင် ဘာဆိုကြမယ် ... ( အနတ္တပါဘုရား ) ။
အင်း အဲဒါလေးသည်ကားလို့ ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ရှေ့ ဥာဏ်အောက်မှာပဲ ပျောက်သွား ပါလိမ့်မယ် ( မှန်လှပါဘုရား ) ဟုတ်ဖူးလား..( မှန်လှပါ ) ။
ဥာဏ်အောက်မှာ ပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ သူက ဘာပြောသွားတုံး.. ( လက္ခဏာ ပြောသွားပါ တယ် ဘုရား ) လက္ခဏာ ပြောသွားတော့ ခင်ဗျားတို့ ဥာဏ်ထဲမှာ ဘယ်ဥာဏ်ရလိုက်သတုံးလို့ မေးရင် ဘယ့်နှယ်ပြောမတုံး.. ( အနတ္တလက္ခဏာဥာဏ်ပါဘုရား ) ။
အနတ္တသိတဲ့ဥာဏ်လဲရတယ်.. ( မှန်လှပါ ) လက္ခဏာ ( သိတဲ့ဥာဏ်လဲရပါတယ်ဘုရား ) ။
ဒါဖြင့် ပေါင်းလိုက်တော့ ( အနတ္တလက္ခဏာဥာဏ်ပါဘုရား ) အနတ္တလက္ခဏာဥာဏ် သေသေချာချာ ရတယ် .. ( မှန်လှပါ ) ရှင်းပလား .. ( ရှင်းပါပြီဘုရား ) ။
ဘာဥာဏ်ရပါလိမ့် .. ( အနတ္တလက္ခဏာဥာဏ် ရပါတယ်ဘုရား ) အင်း ပေးတာသိတုန်းက ဘာရတုံး .... ( အနတ္တပါဘုရား ) ပျက်တာသိတော့.. ( လက္ခဏာပါဘုရား ) ။
သြော် ပေါင်းလိုက်တော့ ... ( အနတ္တလက္ခဏာဥာဏ်ပါဘုရား ) ဒါဖြင့် အနတ္တလက္ခဏာဥာဏ် ရောက်ချင်လို့ရှိရင်လည်း ခန္ဓာတစ်ပါးပါး၏ ဖြစ်မှုနဲ့ ပျက်မှုဟာ မပါရင် မပြီးသေးဘူးပေါ့ဗျာ .. ( မှန်လှပါ ) ။
ဦးဘတင် ပြီးပါ့မလား.. ( မပြီးပါဘူးဘုရား ) မပြီးဘူးဆိုတော့ သဘောကျပလား .. ( ကျပါတယ် ဘုရား ) ကဲ နောက်ဆုံးပိတ်ကျတော့ ဖြစ်ပျက်သာပြန်ဝင်တာပဲ .. ( မှန်လှပါဘုရား ) ဦးဝကြီးကျေနပ်ပလား .. .. ( ကျေနပ်ပါတယ်ဘုရား ) ။
ကောင်းပြီ ဒါဖြင့် ဒီ့ထက်ရှင်းအောင် ဘုန်းကြီးက ပြောပါဦးမယ်၊ ခုတော့ဖြင့် ဒကာ ဒကာမတွေ အနတ္တလက္ခဏာဥာဏ်ကလေး တစ်ခုဝေဒနာလေး ကြည့်လိုက်ပြန်လည်း ဝေဒနာပေါ်လာရင် အနတ္တ၊ ပျောက်သွားရင် ( လက္ခဏာပါဘုရား ) ။
မြင်လိုက်တာလေးက .. ( ဥာဏ်ပါဘုရား ) ဥာဏ်ဘာဥာဏ်ခေါ်ကြမယ် .. ( အနတ္တလက္ခဏာ ဥာဏ် ပါဘုရား ) အနတ္တလက္ခဏာ ဥာဏ်ဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုတာ သေချာပလား.. ( သေချာပါပြီဘုရား ) ။
ကောင်းပြီ ဒါက ဆရာ ဘုန်းကြီးက ရှင်းသထက်ရှင်းအောင်ပြောတာ ( မှန်လှပါ ) ဘုရားက မင်းတို့ ဒီထက်ရှင်းအောင် ငါပြောမယ်ဆိုပြီး ဆဆက္ကသုတ်ကျပြန်တော့ ဦးခင်မောင် လာပြန်ပြီ .. ( မှန်လှပါ ) ။
ဆဆက္ကသုတ်က ဘယ်လိုများ လာလိုက်သတုံးဆိုတော့၊ ဟောဒီကံဆိုတာလည်း စေတနာမဟုတ် လား ဒကာ ဒကာမတို့.... ( မှန်လှပါ ဘုရား ) သူ့ကိုယ်တိုင်က နာမ်ဓမ္မဖြစ်နေသောကြောင့် အတိတ်က နာမ်ဓမ္မအဖြစ်နဲ့ သူ့ကိုယ်တိုင်က အနတ္တမို့ သူက ပြုပြင်တာ ဘယ်လိုဆိုကြမယ် ( အနတ္တပါဘုရား ) ။
သြော်.... ဒါက ပိုရှင်းသေး.. ( မှန်ပါ့ ) မရှင်းဘူးလား ... ( ရှင်းပါတယ်ဘုရား ) ။
အကြောင်းအနတ္တမို့ ဘယ်လိုဆိုကြမယ် .. ( အကျိုးအနတ္တပါဘုရား ) သြော်.. သဘောကျပြီနော် .... ( ကျပါတယ်ဘုရား ) ။
အကြောင်း အနတ္တမို့.. ( အကျိုးအနတ္တပါဘုရာား ) ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ခင်ဗျားတို့က သူ့ပြုပြင် တဲ့ခုတရားနာနေကြတဲ့ ခန္ဓာငါးပါးရှိပါတယ် ... ( မှန်လှပါ ) ။
သူ့ ပြုပြင်တဲ့ အကြောင်းကိုက ဘာတွေတုံး.. ( အနတ္တပါဘုရား ) သြော်.. ဒါဖြင့် အကျိုးတရားက ခိုင်ချင်၊ မြဲချင် တည့်တံ့ချင်လို့တော့ ရပါ့မလား.. ( မရပါဘူးဘုရား ) ။
ဘယ့်နှယ်ဆိုမတုံး ဒါဖြင့် အကျိုးတရားကို.. ( အနတ္တပါဘုရား ) ဒါဖြင့် ဒီသင်္ခါရ တရားကြီး ဘယ့်နှယ် ဆိုကြမယ် .. ( အနတ္တပါဘုရား ) သဘောကျပလား.. ( ကျပါတယ်ဘုရား ) ။
တော်တော်ပေါ်သွားပြီ .. ( မှန်ပါ့ ) ဦးခင်မောင်ပေါ်ပလား.. ( ပေါ်ပါပြီဘုရား ) ဦးဘတင် ပေါ်ပလား.... ( ပေါ်ပါပြီဘုရား ) ။
အကြောင်းကိုက ဘာပါလိမ့် ... ( အနတ္တပါဘုရား ) ဒါဖြင့် ကျုပ်တို့ ခုထိုင်နေတဲ့ ရုပ်နာမ်ကြီး ဘာခေါ် ကြပါ့... ( အနတ္တပါဘုရား ) ၊ အနတ္တပဲဆိုတာ သေချာပလား. ( သေချာပါပြီဘုရား ) ။
ကိုင်း - ဒါဖြင့် အနတ္တ ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ် ခဏလေး စောင့်ကြည့်လိုက်ရင် ဘာတွေများ ပြောမယ်ထင်တုံး.. ( လက္ခဏာပြောမှာပါဘုရား ) ။
လက္ခဏာ အသေအချာပြောတော့မယ် .. ( မှန်လှပါ ) မပြောပေဘူးလား.. ( ပြောမှာပါဘုရား ) ။ ယားတဲ့ နေရာလေး ဒကာ ဒကာမတွေက အင်း ယားတဲ့ နေရာ ဝေဒနာက္ခန္ဓာလေးပေါ်တယ် ။
ယားတာက သူယားချင်လို့ ယားတာလား အကြောင်းက တိုက်ဆိုင်လို့ယားတာလား.. ( အကြောင်း ကတိုက်ဆိုင်လို့ ယားတာပါဘုရား ) ။
အင်း ဟိုက ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံဆိုတဲ့ ယားတတ်တဲ့ မြေမှုန့်တို့ ဘာတို့နဲ့ထိလို့ ယားတတ်တဲ့ ဝေဒနာလေး ပေါ်လာတာ ( မှန်ပါ့ ) ကိုယ့်လုပ်တဲ့ ဝေဒနာ ဟုတ်ပါရဲ့ လား.. ( မဟုတ်ပါဘူးဘုရား ) ။
အင်း စောင့်ကြည့်နေတော့လည်း ပျောက်သွားတယ် ( မှန်ပါ့ ) ပျောက်သွားတော့ နဂိုပေါ်တုန်းက အနတ္တ၊ ပျောက်သွားတော့ နဂိုပေါ်တုန်းက အနတ္တ၊ ပျောက်သွားတော့ လက္ခဏာ သဘောကျပလား.. ( ကျပါတယ်ဘုရား ) ။
ဒါဖြင့် ခင်ဗျားတို့မှာ ဘယ်ဥာဏ်ရလိုက်ပါလိမ့်.. ( အနတ္တ လက္ခဏာဥာဏ် ရပါတယ် ဘုရား ) ။
အနတ္တလက္ခဏာဥာဏ်ရလိုက်တော့ ဒကာ ဒကာမတို့ ပဋိစ္စ သမုပ္ပါဒ်ပြတ်ထွက်သွားတယ် .. ( မှန်လှ ပါဘုရား ) ။
ကဲ ရှေ့ ကြည့်ကြပါ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပြတ်ပုံ ရှင်းပြလိုက်မယ်နော်၊ ဟောဒီ ခန္ဓာငါးပါးကို ဘာခေါ်ကြမယ် ဒကာ ဒကာမတို့ .. ( အနတ္တပါဘုရား ) အနတ္တပျက်သွားရင် ( လက္ခဏာပါဘုရား ) လက္ခဏာ ။
အဲဒီ အနတ္တနဲ့ လက္ခဏာကို နှစ်ခုစလုံးသိတာလေး ကို ဘာခေါ်ကြမယ် .. ( အနတ္တလက္ခဏာဥာဏ် ဘုရား )အနတ္တလက္ခဏာ ဥာဏ်ဆိုပြီး ဒီက အနတ္တဏာဥာဏ်ဆိုတာ ဒကာ ဒကာမတွေ မှတ်လိုက်ပါတော့ မဂ္ဂင်ငါးပါးပါပဲ.. ( မှန်ပါ့ )။
ဒီခန္ဓာငါးပါး တစ်ပါးပါးကို အနတ္တလက္ခဏာ ဥာဏ်ပေါ်အောင် လုပ်ရမယ်ဆိုတာက မဂ္ဂင်ပေါ်လာတာ ( မှန်လှပါ ) သဘောကျပလား .. ( ကျပါတယ်ဘုရား ) ။
ဘာပေါ်လာတုံး.. ( မဂ္ဂင်ပေါ်လာပါတယ်ဘုရား ) မဂ္ဂင်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာ ကောင်းကောင်းသေချာ ပလား .. ( သေချာပါတယ် ဘုရား ) ။
သြော်.. ဒါသည်ကားလို့ ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် မဂ္ဂင်ထဲမှာလဲ ဦးဘတင်က ကြည့်လိုက်စမ်း၊ ကိုမြရွှေ တို့က ကြည့်လိုက်စမ်း၊ မဂ္ဂင်ထဲ ဘယ်သူ ခေါင်းဆောင်နေတုံးဆိုတော ဒိဋ္ဌိ ခေါင်းဆောင်နေတယ် .. ( မှန်ပါ့ ) ။
သမ္မာဒိဋ္ဌိ ခေါင်းဆောင်နေတော့ ခုနင်က အနတ္တလက္ခဏာဥာဏ်ထဲမှာ သမ္မာဒိဋ္ဌိက ခေါင်းဆောင် နေတယ် ဆိုတာ မသေချားဘူးလား... ( သေချာပါတယ်ဘုရား ) ။
နဂိုက ငါ့ကိုယ် ငါ့ဟာ လုပ်နေတာ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကခေါင်းဆောင်တယ် .. ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
အင်း နဂိုတုန်းကတော့ ခန္ဓာငါးပါး ငါ့ကိုယ့် ငါ့ဟာ လုပ်တုန်းက ( မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိက ခေါင်းဆောင်နေပါတယ် ဘုရား ) ခုတော့ သမ္မာဒိဋ္ဌိက ခေါင်းဆောင်တယ် ဆိုကတည်းက မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟာ လောဘနဲ့ တွဲနေတာ လောဘ နဲ့ တွဲနေတဲ့ ဒိဋ္ဌိဟာ ဒီနေရာမှာ ဒိဋ္ဌိတဏှာ မပြုတ်ဘူးလား..( ပြုတ်ပါတယ် ဘုရား ) ။
ဒါဖြင့် တဏှာပြုတ်တော့ တဏှာနောက်က လိုက်တဲ့ ဥပါဒါန်.. ( ပြုတ်ပါတယ် ဘုရား ) ကံတွေ .. ( ပြုတ်ပါတယ်ဘုရား ) ။
အင်း, ဘယ့်နှယ်ကြောင့် ပြုတ်ပါလိမ့်မတုံးဆိုတော့ အို.. သမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ္ဂင်ငါးပါးပေါ်လာလို့ .. ( မှန်လှပါ ဘုရား ) ၀ိပဿနာမဂ္ဂင်ပေါ်လာလို့ .. ( မှန်လှပါဘုရား ) ၊ ရှင်းကြပလား..( ရှင်းပါပြီဘုရား ) ။
ဘာပေါ်လာပါလိမ့် .. ( ၀ိပဿနာမဂ္ဂင်ပေါ်လာလို့ပါဘုရား ) ။ ဒါဖြင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ပြတ်မပြတ် ... ( ပြတ်ပါတယ်ဘုရား ) ။
ဘယ်က စပြတ်သတုံးဆိုတော့ ဒိဋ္ဌိနဲ့ ရောနေတဲ့ တဏှာက စပြတ်တယ် .. ( မှန်လှပါဘုရား ) ၊ ဦးခင်မောင် ဘယ်ကစပြတ်တုံး... ( ဒိဋ္ဌိနဲ့ရောနေတဲ့ တဏှာကစပြတ်ပါတယ်ဘုရား ) ။
ဒိဋ္ဌိနဲ့ တဏှာနဲ့ကတည်း တွဲရက်မို့လား..( တွဲရက်ပါဘုရား ) သင်္ဂြီုဟ်ရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ လူတိုင်းသိပါ တယ် ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
လောဘနဲ့ ဒိဋ္ဌိက တွဲရက်ပါကွာ အဲတော့ ဒီလောဘ ဒိဋ္ဌိပြတ်မသွားဘူးလား..( ပြတ်သွားပါတယ် ဘုရား ) ပြတ်သွားတော့ ဥပါဒါန်ကကော.. ( ပြတ်ပါတယ်ဘုရား ) ။
အင်း ဥပါဒါန်ရှိမှ လာမယ့် ကံကကော... ( မလာပါဘူးဘုရား ) မလာတော့ဘူးဆိုတော့၊ သြော်.. အနတ္တလက္ခဏာ ဥာဏ်သည် ဒိဋ္ဌိကို ဖြတ်တယ်လို့ ဆိုတာကော သေချာပလား .. ( သေချာပါတယ်ဘုရား )။
တဏှာလဲ ရောပါသွားလေရဲ့ ကော... ( ဆိုနိုင်ပါတယ်ဘုရား ) ဆိုနိုင်ကြပြီမို့လား.. ( ဆိုနိုင်ပါတယ် ဘုရား ) ။
သြော်.. ဒါဖြင့် သာမည မဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့ ဥစ္စာ ဒကာ ဒကာမတွေ ရှင်းသွားတယ် .. ( ရှင်းပါတယ် ဘုရား ) ။
သြော်... တကယ့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တကယ်ပြောတာပါလားဆိုတော့ ကိုယ်သွားရာ လမ်းခရီးကြီး၊ ကိုယ့် စိတ်စဉ်တန်းကြီး ဒါကြီးကိုပင်လျှင် ဒီအစဉ်တိုင်းသာ ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင် ဒီအစဉ်တိုင်းသွားပြီသကာလ အပါယ် လေးပါးကျအောင်ပဲ၊ ခန္ဓာတွေ ပေါ်ပြီးသကာလ အပါယ်လေးပါးကျအောင်ပဲ၊ ခန္ဓာတွေပေါ်ပြီးဆင်းရမှာ ဖြစ်နေတာကြီး ယခုတော့ဖြင့် အရှင်းကြီး ရှင်းသွားပြီလို့ ဒကာ ဒကာမတွေ ဆိုနိုင်ကြပလား ... ( ဆိုနိုင်ပါ တယ်ဘုရား ) ။
ကိုင်း ဒါဖြင့် ဦးခင်မောင်ရေ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပြတ်မပြတ် ချိန်ကြစမ်းပါဦး .. ( ပြတ်ပါတယ်ဘုရား ) ။
ဘယ်ဥာဏ်က ဖြတ်လိုက်ပါလိမ့် .. ( အနတ္တလက္ခဏာ ဥာဏ်ကပါဘုရား ) ကိုင်း ဒကာ ဒကာမတို့ အနတ္တ တစ်လုံးပေါ်ရင် နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်ကွလို့ ပြောတော့ အပေါ်ယံ ဖြစ်နေတယ် .. ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ခုတော့ အနတ္တလက္ခဏာဥာဏ်က ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဖြတ်လိုက်တယ်ကွဆိုမှ သြော် သံသရာပြတ်ပေါ့ ဆို တာ သေချာသွားတယ် ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
မသေချာဘူးလား .. ( သေချာပါတယ်ဘုရား ) ။ အင်မတန် အဖိုးတန်သွားပြီ ဒကာ ဒကာမတို့ ( မှန် လှပါဘုရား ) မတန်သေးဘူးလား..( တန်ပါတယ်ဘုရား ) ။
ဒါဖြင့် ဒါ သင်္ခါရတရား၊ ရှေ့ ပိုင်းက ငါးပါးဟာ ဘာတရားတွေတုံး....( သင်္ခါရတရားပါဘုရား ) အဲဒီ သင်္ခါရတရားတွေဟာ ဘယ်တော့မှ မြဲတယ်မရှိဘူးဆိုတော့ ပျက်စီးတာချည့်ပဲ မနေဘူးလား ( နေပါတယ် ဘုရား ) ။
အဲတော့ သင်္ခါရတရားလို့ သိထားတုန်းက အနတ္တဥာဏ်ရပြီ ၊ အနတ္တရသွားပြီ .. ( မှန်လှပါ ) ပျက်တာလေးသိလိုက်တော့ အနတ္တ လက္ခဏာဥာဏ် ရသွားပြီ ( မှန်လှပါ ) ။
ဒါဖြင့် အနတ္တ သိတာလည်း ဥာဏ် .. ( မှန်ပါ့ ) လက္ခဏာသိတာလည်း ..( ဥာဏ်ပါဘုရား ) ဥာဏ်ပဲ တဲ့ ။
ဒီဥာဏ်သည်၊ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် အလယ်ကပြတ်တယ်
ဒကာ ဒကာမတို့ အဲဒီဥာဏ်သည် ဘာကိုနှိမ်နင်းဖျက်ဆီးလိုက်ပါလိမ့်မလဲ မေးလိုက်တဲ့အခါကျ တော့မှ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် အလယ်က ဖြတ်ပါတယ်ဘုရားလို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ.. ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမတုံး... ( ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အလယက်ဖြတ်ပါတယ်ဘုရား ) အင်း ဒိဋ္ဌိတဏှာက စဖြတ်လိုက်တယ် .. ( မှန်ပါ့ ) သဘောကျပလား.. ( ကျပါတယ်ဘုရား ) ။
တစ်ခါ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် အစကလည်း ဖြတ်ပါတယ် ဘုရားလို့ဆိုရင်လည်း သမ္မာဒိဋ္ဌိက ၀ိဇ္ဇာဖြစ်သွား ပြန်တယ် ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ဒါဖြင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် အစကလည်းပြတ်၊ အလယ်ကလည်း ပြတ်သည်ဖြစ်လေသောကြောင့် ဒကာ ဒကာမတို့ နိဗ္ဗာန်ဆုမတောင်းလည်း ရှုသာနေ၊ ရတယ်.. ( မှန်ပါ့ဘုရား ) ။
ဆုမတောင်းနဲ့တော့ ... ( မှန်လှပါ ) ဦးဘတင် ဆုတောင်းချင်ရင် ... ( မလိုပါဘူး ဘုရား )၊ မလိုပါဘူး တဲ့ အ၀ိဇ္ဇာချုပ်လို့ရှိရင် ၀ိဇ္ဇာဥဒပါဒိ ဖြစ်တာပဲ .. ( မှန်လှပါ ) သဘောကျပလား.. ( သဘောကျပါတယ် ဘုရား ) ။
ကောင်းပြီ ဒကာ ဒကာမတို့ ဒါဖြင့် အနတ္တလက္ခဏာဥာဏ်ဟာဖြင့် သင်္ခါရတရားကို သိမှ အနတ္တလက္ခဏာဥာဏ်ဟာပေါ်မယ် .. ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
သင်္ခါရတရားမသိရင် .. ( အနတ္တလက္ခဏာဥာဏ်ဟာ မပေါ်ပါဘူး ဘုရား ) အဲ သင်္ခါရတရားသိတော့ မှ သူများလုပ်ထားတာကိုးလို့ နဂိုက သိထားတော့မှ သြော်.. အဲဒီက အနတ္တသိတယ် ... ( မှန်လှပါဘုရား )။
နောက် သင်္ခါရ တရားက သူများလုပ်ထားတာမို့ မခိုင်လို့ ပျက်သွားတဲ့အခါကျတော့မှ လက္ခဏာသိ တယ် .... ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ဒါဖြင့် သင်္ခါရကိုမသိပဲနဲ့ အနတ္တလက္ခဏာ သိဖို့ အရေးဟာဖြင့် မရှိဘူးလို့ မှတ်လိုက်... ( မှန်လှပါ ဘုရား ) ။ ပေါ်ကြပလား... ( ပေါ်ပါပြီဘုရား ) ။
သင်္ခါရသိမှနော်.. ( မှန်လှပါဘုရား ) အနတ္တလက္ခဏာသိနိုင်တယ် ( မှန်လှပါဘုရား ) စကားက တော့ဖြင့် တခြားစီပဲလို့ ထင်ချင်ထင်ကြမယ်ပေါ့ဗျာ.... ( မှန်လှပါ ) ။
သို့သောလည်း ကိုမြရွှေတို့၊ ဒကာသစ်တို့က စဉ်းစားလိုက်၊ သင်္ခါရ မသိပဲနဲ့ အနတ္တသိပါတယ်ဆိုရင် အလားပြောတာ .. ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ဦးခင်မောင် ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချ... ( သင်္ခါရမသိပဲနဲ့ အနတ္တ သိပါတယ်ဆိုရင် အလကား ပြောတာပါ ဘုရား ) ယုံကော ယုံပလား... ( မယုံပါဘူးဘုရား ) ။
ကဲ ဒါဖြင့် သင်္ခါရတရားဆိုတာ သူများပြုပြင်ထားတာ သိတော့မှ အနတ္တက အဲဒီအချိန်မှ စပေါ်တာဗျ.... ( မှန်လှပါ ) သူများပြုပြင်ထားတဲ့ တရားမှန်းသိတော့ ဘာလာပေါ်တုံး... ( အနတ္တပေါ်ပါတယ် ဘုရား ) ။
သူများ ပြုပြင်ထားတဲ့ တရားလေးဟာ ပြုပြင်တဲ့ အတိုင်း မခိုင်တာလေး မြင်တော့မှ ဘာပေါ်လာတုံး .... ( လက္ခဏာ ပေါ်လာပါတယ်ဘုရား ) ဒါဖြင့် သင်္ခါရာ သဿတာ နတ္ထိ ဆိုတာ ပေါ်လာတယ် .. ( မှန်လှပါ ဘုရား ) ။
သင်္ခါရာ - သင်္ခါရတို့သည် ၊ သဿတာ - ခိုင်မြဲကုန်သည်၊ နတ္ထိ - ဘယ်တော့မှ မရှိဘူးလို့ မင်းတို့ ဆုံး ဖြတ်ချက်ချ.... ( မှန်လှပါဘုရား ) ၊ သဘောကျပလား.. ( ကျပါတယ်ဘုရား ) ။
သင်္ခါရဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မခိုင်မြဲဘူးလို့ မင်းတို့ ရှုရမယ် ( မှန်လှပါဘုရား ) ရှင်းပလား... ( ရှင်းပါပြီ ဘုရား ) ။
သင်္ခါရဟာ ... ( ဘယ်တော့မှ မခိုင်မြဲပါဘူး ဘုရား ) အဲ ခင်ဗျားတို့ တစ်ကိုယ်လုံးကလည်း သင်္ခါရ ခန္ဓာကိုယ် ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ပေါ်လာတာလေးတွေ ဘယ်တော့မှ မခိုင်ဘူးလို့သာ ရှုနေလို့ရှိရင် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပြတ်မပြတ် ... ( ပြတ် ပါတယ်ဘုရား ) အစကလည်း ... ( ပြတ်ပါတယ်ဘုရား ) ။
အလယ်ကလည်း ... ( ပြတ်ပါတယ်ဘုရား ) နိဗ္ဗာန်မှ ရောက်ပါ့မလား... ( ရောက်ပါတယ်ဘုရား ) နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ တခြားလား၊ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် နောက်ဆက်မလာတာဆိုတာလား.. ( ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် နောက်ဆက်မ လာတာဆိုတာပါဘုရား ) ။
နောက်ဆက်လာရင် ဘာသစ္စာ .. ( ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား ) အဲဒီနောက်ဆက်မလာတော့ ဒုက္ခချုပ်တာ. ... ( မှန်ပါ့ ) အဲဒီနောက်ဆက်မလာတော့ ဒုက္ခချုပ်တာ ( မှန်ပါ့ ) .. ဒုက္ခချုပ်တာ ဘာခေါ်ကြ .. ( နိဗ္ဗာန်ပါ ဘုရား ) ။
သြော်.... နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ မြို့ ကြီး၊ ပြကြီးလား မှတ်နေတယ် စင်စစ်တော့ ဒုက္ခချုပ်သွားတာကိုး... ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချ. ( ဒုက္ခချုပ်သွားတာပါ ဘုရား )၊ ဒုက္ခချုပ်သွားတာကိုးဆိုတာ ကောင်း ကောင်းကျေနပ်ပလား.. ( ကျေနပ်ပါတယ်ဘုရား ) ။
သြော်.. ဒကာ ဒကာမတို့ တယ်နေကျပါလား.. ဒါဖြင့် အခုဆရာဘုန်းကြီး ဟောလိုက်တော့ အနတ္တ လည်းသိတယ်.ယနေ့ .. ( မှန်လှပါ ) အနတ္တလက္ခဏာလည်း ... ( သိပါတယ်ဘုရား ) ။
ဥာဏ်လည်းရပြီ ... ( မှန်ပါ့ ) ဒီဥာဏ်က ဘာကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာလဲ ဦးခင်မောင်တို့ ရပြီ ... ( ရပါတယ်ဘုရား ) ဒိဋ္ဌိ တဏှာကို ဘယ့်နှယ်နေတုံး.. ( ဖြတ်ပါတယ် ဘုရား ) ။
သြော်... ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် အစကလည်းပြတ်၊ အလယ်ကလည်း ပြတ်တယ်ဆိုတာ မသေချာဘူးလား..... ( သေချာပါတယ်ဘုရား ) ။
ဒါကြောင့် မနေ့က သုဘဒ်ကို ပြန်ဆက်လိုက်.. ( မှန်လှပါဘုရား ) သုဘဒ် ရဟန်းက မေးလိုက်တယ်၊ အရှင်ဘုရား မရှိသည့်နော် သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ် တွေဟာ အရှင်ဘုရားလည်း ပရိနိဗ္ဗာန်စံရော အားလုံးကွယ်တော့မှာပဲလားဆိုတာ မေးတယ် .. ( မှန်လှပါဘုရား )။
ဟေး သုဘဒ် ဘုရားကဖြေပြီ ..( မှန်လှပါ ) ဣမေစ သုဘဒ္ဒဘိက္ခူ သမ္မာ ၀ဟရေယျုံ၊ အသုညော လောက အရဟန္တေဟိ - အဿ
သုဘဒ္ဒ - သုဘဒ် ရဟန်း၊ ဣမေ - ဤလောကမှာနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့သည်၊ သမ္မာ - မဖောက်မ ပြန် အနတ္တ၏ လက္ခဏာကိုသိနေသည် ဖြစ်ပါအံ့၊ မဖောက်မပြန်ကို သိရမယ်နော် .. ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
အနတ္တလည်းသိ၊ လက္ခာလည်းသိပေါ့ဗျာ ... ( မှန်လှပါဘုရား ) သမ္မာ - ကောင်းစွာ ၊ ၀ိဟရေယျုံ - အနတ္တလက္ခဏာကို ကျင့်ကြံပြီး နေခဲ့ကြကုန်သည် ဖြစ်ပါအံ့၊ အရဟန္တေဟိ - ရဟန္တာတို့မှ အသုညော - မဆိတ်သည် ၊ အဿ ၀ ဖြစ်ရာ၏ ။ ( မှန်လှပါ ) ။
ဆရာကောင်းနဲ့ တွေ့ လို့ကျင့်ရင် ရဟန္တာတောင်မဆိတ်သုဉ်းဘူး
ငါမရှိတာ ဘာမှမဆိုင်ဘူးကွ .. ( မှန်လှပါ ) ဒီခုပြောတတ်တဲ့ ဆရာနဲ့ ပြောပြီးသကာလ မင်းတို့ သူပြောတဲ့အတိုင်း ကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်၊ ဘယ်အချိန်မဆို ရဟန္တာတောင် မဆိတ်ဘူးဆိုသဖြင့် သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ် မလိုတော့ဘူး.. ( မှန်လှပါဘုရား ) သဘောကျပလား... ( ကျပါတယ်ဘုရား ) ။
ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ဘယ်သူပြောတာမှ မယုံနဲ့ အခု ပရိနိဗ္ဗာန်စံခါနီး ပြောတာ တစ်ထစ်ချ မှတ် လိုက်တော့ .. ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
သုဘဒ်ရဟန်းက မေးတာလည်း ဦးခင်မောင် သေချာပလား..( သေချာပါတယ်ဘုရား ) အရှင်ဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့မှာ အရှင်ဘုရား မရှိရင် သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်၊ ရဟန္တာ ကွယ်ရတော့မှာလား ။
ဒါနောင်လာ နောက်သားတွေ ဆင်ခြေတက်မှာစိုးလို့ မေးတာ ... ( မှန်လှပါဘုရား )ဟေ့! ဘယ်တော့ မှမကွယ်ဘူးကွ ၊ ကောင်းအောင်သာကျင့်ပြီး၊ အနတ္တ၏ လက္ခဏာ၊ အနတ္တနဲ့ လက္ခဏာကိုရှင်းအောင်သာ မင်းတို့က ကြည့်ပြီး ဟောတတ်တဲ့ ဆရာနဲ့ပေါင်း ။
ပေါင်းပြီးသကာလ မင်းတို့ ဒီဥာဏ်ရပစေ.... ( မှန်လှပါ ) ဒီဥာဏ်ရရင် ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ပြတ်တာဟာ နိဗ္ဗာန်ပဲ .... ( မှန်ပါ့ ) ။
ပထမပြတ်ရင် သောတာပန် ဖြစ်မှာပဲ .. ( မှန်ပါ့ ) ဒုတိယပြတ်ရင် .. ( သကဒါဂါမ်ပါဘုရား ) ။
နောက် တတိယ ပြတ်သွားရင် ... ( အနာဂါမ်ပါ ဘုရား ) အဲ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်က လေးမျိုးရှိတာကိုး.... ( မှန်လှပါ ) ။
သာတာပန် ဖြတ်နိုင်တဲ့ ဥစ္စာက ဒိဋ္ဌိဝိစိကိစ္ဆာ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သာ ဖြတ်နိုင်တာ ... ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ် ဖြတ်နိုင်တာက ကာမရာဂ၊ ရူပရာဂနဲ့ ဖြတ်တဲ့ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် အစအဆုံး ဒါကိုသာ ဖြတ်နိုင်တာကိုး.. ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ရဟန္တာကတော့ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဆိုလို့ရှိရင် လုံးလုံးကို ဖြတ်ချလိုက်တာ... ( မှန်လှပါဘုရား ) သဘောကျပလား .. ( ကျပါတယ်ဘုရား ) ။
ဒီတော့ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်က လေးမျိုးရှိတော့ကိုး ပထမ အမျိုးကနေပြီး ဒိဋ္ဌိဖြတ်တာက ဒီအနတ္တနဲ့ ဖြတ်ယူကြပါ... ( မှန်လှပါ ) သဘောကျပလား.. ( ကျပါတယ်ဘုရား ) ။
ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတွေ ဘယ်တရားလေးပေါ်လာပေါ်လာ ပေါ်လာတာ ဘာခေါ်ကြမတုံး... ( အနတ္တ ပါဘုရား ) ပျက်သွားတာကတော့ ... ( လက္ခဏာပါဘုရား ) မသိဘူးလား.. ( သိပါတယ်ဘုရား ) ။
သိတာလေးက ဘာဆိုကြမယ် .. ( အနတ္တလက္ခဏာဥာဏ်ပါဘုရား ) ။
အဲဒီဥာဏ်လေးဟာ ဘာဖြတ်ပါလိမ့် ... ( ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် အစကော၊ အလယ်ကော ဖြတ်ပါတယ် ဘုရား ) ။
အစကဖြတ်လိုက်တော့ ၀ိဇ္ဇာ ဥဒပါဒိဖြစ်တယ် ... ( မှန်လှပါဘုရား ) သဘောကျပလား.. ( မှန်လှပါ ဘုရား ) အစဖြတ်လိုက်တော့ ... ( ၀ိဇ္ဇဥဒပါဒိပါဘုရား ) ။
၀ိဇ္ဇာဥဒပါဒိ ဖြစ်ပြီဆိုတာ မသေချာဘူးလား... ( သေချာပါတယ်ဘုရား ) အလယ်က ဖြတ်လိုက်တော့ တဏှာနိရောဓ သွားဖြစ်တယ် ... ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
သဘောကျပလား.. ( ကျပါတယ်ဘုရား ) အစက ဖြတ်လိုက်တော့ .... ( ၀ိဇ္ဇာဥဒပါဒိပါဘုရား ) အလယ်ကဖြတ်လိုက်တော့ ( တဏှာနိရောဓောပါဘုရား ) ။
ဒါဖြင့် တဏှာနိရောဓော နိဗ္ဗာနံပဲ ...( မှန်လှပါ ) ၀ိဇ္ဇာဥဒပါဒိ ဆိုတာလည်း နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ ဥာဏ်ဖြစ်ပေါ့လို့ပြောတာပဲ... ( မှန်လှပါဘုရား ) ထူးသေးရဲ့ လား... ( မထူးပါဘူးဘုရား ) ။
အဲဒါ အသေအချာမပိုင်သေးဘူးလား... ( ပိုင်ပါတယ်ဘုရား ) အဲတော့ ဘယ်အချိန်လုပ်လုပ် ခင်ဗျား တို့ သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်၊ ရဟန္တာ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလုပ်ပါ.... ( မှန်လှပါ ဘုရား ) ရှင်းပလား... ( ရှင်းပါပြီဘုရား ) ။
ကဲ ယနေ့ ဒီတွင် တော်ပါဦး ။
သာဓု ..... သာဓု ...... သာဓု ...... ။
မန္တလေးမြို့ ၌ဟာကြားတော်မူသော တရားတော်
( အနတ္တလက္ခဏာဥာဏ် )
ဟောကြားသည့်နေ ( ၁၉ ၊ ၃ ၊ ၆၀ )
nyansoe သည် ဇူလှိုင် 12, 2013 က 4:49pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။